I am just posting this new year message from my bro!
Posted by YeKyawAungMDY at 12:19 PM
No good days for me
Everytime I read the News about Burma!! I never have happy days for Burma and myself since i've known deeply about Burma !!
Posted by YeKyawAungMDY at 7:39 PM
၈၈၈၈ သွေးသစ်ရဲဘော်များမှ ၂၀၀၈ ခုနှစ် ပြက္ခဒိန်ကို ထုတ်ဝေ
Posted by YeKyawAungMDY at 6:54 PM
Posted by YeKyawAungMDY at 1:42 PM
"The Tao of Pooh" (မျှဝေခြင်းပါ)
"It is not known as much of anything in particular".
( ဘာမှ ဖြစ်ဖြစ်မြောက်မြောက် လူတိုင်းမသိနိုင်ပါ။ ယောင်ဝါးဝါးပဲ။ )
"Many people are afraid of Emptiness, however, because it reminds them of Loneliness. Everything has to be filled in, it seems - appointment books, hillsides, vacant lots - but when all spaces are filled, the Loneliness really begins."
( ပိုင်ဆိုင်မှုတွေ များပြားချင်တာ လူ့သဘာဝပဲ။ ကျော်ကြားချင်မှု၊ အသိအမှတ်ပြုခံချင်မှု၊ အရာရာ နေရာပေးခံချင်မှု၊ ဒါက စိတ်ပိုင်းဆိုင် ရာတပ်မက်မှု။ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကတော့ ပြောစရာမလိုတော့။ ) ( ဒါကြောင့် ဘာမှ မရှိမှုဟာ အေးချမ်းတယ်။ )
"To attain knowledge, add things every day. To attain wisdom, remove things every day".
( အသိပညာ နောက် တကောက်ကောက်လိုက်နေမှုက တကယ်ရော ပညာရှိလာကြသလား။ )
It's all there infront of you,
ဖတ်ကြည့်ဖို့တိုက်တွန်းပါတယ်။ အကုန်တော့ ယူပြီးမှန်တယ်လို့တော့ ပြောမရပါ။ ဒါပေမယ့် လက်သင့်ခံစရာတွေ အများကြီးပဲ။
Posted by YeKyawAungMDY at 4:49 PM
"၈၇ ကြိမ်မြောက် အမျိုးသားအောင်ပွဲနေ့ ထုတ်ပြန်ချက်"
Posted by YeKyawAungMDY at 1:00 PM
အမေလူထု ဒေါ်အမာ မွေးနေ့အတွက် ဗကသများအဖွဲ့ချူပ်မှ ကဗျာ
Posted by YeKyawAungMDY at 7:28 PM
နအဖရဲ့ ရှေ့ခြေလှမ်းကိုရိုက်ချိုးဖို့ ပြင်ကြစို့
Posted by YeKyawAungMDY at 8:19 PM
မကြည့်ရသေးသောသူများ ဒီမိုကရက်တစ်မြန်မာ့အသံမှာ သွားကြည့်ဖို့ တိုက်တွန်းပါရစေ။
၁၈ နိုဝင်ဘာ ၂၀၀၇ နေ့စွဲနဲ့ပါ။
Posted by YeKyawAungMDY at 9:22 PM
ကြခတ်ဝိုင်း ဘုန်းကြီး၏ နောက်ဆက်တွဲ သတင်းများ (ဆုံဆည်းရာ cbox မှ ယူထားပါသည်)
ဆုံဆည်းရာ cbox မှ ကူးယူ ဖြန့်ဝေထားခြင်းပါ။
ကြခတ်ဝိုင်း ဆရာတော်နဲ့ ကျောင်းတိုက်က သံဃာတွေကို ပဲခူးမြို့ခံတွေ သပိတ်မှောက်
ကြခတ်ဝိုင်း နှင့် ငါတို့ရဲ့ဘ၀ အကြောင်းတစေ့တစောင်း
Posted by YeKyawAungMDY at 2:17 PM
Possible Air Strikes From US to Than Shwe's Home
An artist’s impression on striking at Than Shwe’s residence in Naypyidaw
Posted by YeKyawAungMDY at 11:30 PM
စင်ကာပူမှ ရဲရဲတောက် မျိုးချစ်မြန်မာများ၏ ဆန္ဒပြမှု During Asean Summit
We all Burmese salute you all there, Singapore, for the protest for free Burma.
This protest is the great event for free Burma!!!!!!!!!! Salute you all!!!!!
See the info:
Posted by YeKyawAungMDY at 1:16 AM
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အကြောင်း တစ်စိပ်တစ်ပိုင်းကို ရာဇာလီပုံဖော်ထားပုံ ဧရာဝတီ မဂ္ဂဇင်းမှ ဘာသာပြန်ကို မဖတ်ရသေးသူများ ဖတ်ရှူဖို့ တိုက်တွန်းပါရစေ။
Posted by YeKyawAungMDY at 9:47 PM
သံဃာ့သာမဂ္ဂီ အဖွဲ့ဝင်ဆရာတော် ၏ ဆုံးမသြ၀ါဒ တရားတော်
Posted by YeKyawAungMDY at 7:27 PM
စင်္ကာပူရောက် မျိုးချစ်မြန်မာများ ၏ မြန်မာ့အရေးဆွေးနွေးပွဲ
I got it to copy from here: http://burmapyithar.blogspot.com/
စင်္ကာပူရောက်မျိုးချစ်မြန်မာများ ၏ မြန်မာ့အရေးဆွေးနွေးပွဲတစ်ခုကို 17 ရက်နေ့စနေနေ့မှာ penisula Excelsior Hotel မှာ ညနေ၅နာရီမှ စတင်ကာ ကျင်းပမယ်လို့သိရပါတယ်။ 17 ရက် နေ့ မှ 21 ရက်နေ့ အထိ စင်္ကာပူမှာ ကျင်းပနေတဲ့ အာစီယံ ဆန်းမစ် မှာ အာစီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင် ငံတွေ နဲ့ တရုတ်၊ ဂျပန် နဲ့ အိန္ဒိယ စတဲ့ နိုင်ငံ တွေက ခေါင်း ဆောင်တွေပါ တက်ရောက် ကျမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရွှေ မြန်မာတွေအနေနဲ့လည်း စစ်အစိုးရရဲ့ လူမဆန်တဲ့လုပ်ရက်တွေကို ကမ္ဘာ့ ခေါင်းဆောင်တွေ ရှေ့မှာ ရှုပ်ချနိုင်မယ့် အခွင့်အရေးကို လက်မလွှတ်ပဲ စုံစုံလင်လင် နဲ့ တက်ရောက်ဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။
မှတ်ချက်။ ဒီပွဲဟာတော်တော်လေးထူးခြားပါတယ်။ ပြည်ပရောက် မျိုးချစ်မြန်မာများအဖွဲ့၊ လမ်းပြကြယ်၊ အိုးဝေ၊ သံလွင်အိမ်မက်၊ ဘားမားအက်ရှင် စင်္ကာပူ၊ concern of burma၊ အခွန်နှစ်ထပ်မပေးဆောင်ရေးအဖွဲ့ နဲ့ burma bloggers အဖွဲ့များအားလုံး စုံညီစွာ စုစည်းပြီးကျင်း ပတဲ့ပွဲ မို့လို့ပါ။ မြန်မာ့ အရေး ဆောင်ရွက်ရာမှာ အားလုံးစည်းလုံးညီညွတ်စွာ စုစည်းဆောင်ရွက်ရင် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ဒီမိုကရေစီပန်းတိုင် ဟာမဝေးတဲ့အနာဂတ်မှာရရမှာပါ။
5:30 pm To 8:30 pm, 17th November 2007 (Saturday)
ကြရောက်လာကြသော ဧည့်ပရိတ်သတ်များ စိတ်အနှောင့်အယှက် တစ်စုံတစ်ရာ မဖြစ်ပေါ်စေရန် တစ်ဖက်တစ်လမ်းမှ ကူညီပံ့ပိုးသောအားဖြင့် Camera များ ယူဆောင်လာကြခြင်း မပြုပါရန်နှင့် Handphone များဖြင့်လည်း ရိုက်ကူးခြင်းမပြုကြပါရန
Posted by YeKyawAungMDY at 11:13 PM
ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီ၏ မြန်မာ့အရေး ဆွေးနွေးပွဲ (မစ္စတာဂန်ဘာရီ၏ မြန်မာ့အရေးတင်ပြခြင်း-အင်္ဂလိပ်လိုမူရင်း)
Posted by YeKyawAungMDY at 6:31 PM
ရေးထားတာကြာခဲ့ပြီဖြစ်သော၊ ကိုယ်တိုင်ခံစားရေးထားသော စာစုလေးနှစ်ခုကို ဝေမျှခြင်းပါ
Posted by YeKyawAungMDY at 10:50 PM
အနှစ် (၆၀)မြောက်ဖက်ဆစ်တော်လှန်ရေးနေ့ အထိမ်းအမှတ် မဂ္ဂဇင်းမှ ပြန်လည်ကူးယူဖော်ပြထားပါသည်။ အမျိုးသားစာဆိုတော်ကြီး ဆရာကြီးဦးတင်မိုး၏ ကဗျာအများစုသည် မြန်မာပြည်စစ်အာဏာရှင်လက်အောက်မှ လွတ်မြောက်ဖို့ အတွက် ရဲစိတ်ရဲမာန်သွင်းပေးသော ရဲရဲတောက်ကဗျာများဖြစ်ပါသည်။ ဆရာကြီး ကောင်းရာသုဂတိလားပါစေ။
Posted by YeKyawAungMDY at 8:31 PM
Resolution from SAIH's Annual Assembly 2007: Support to students in Burma, Colombia, Zimbabwe, and Western Sahara
The situation for students in Burma , Colombia , Zimbabwe and Western Sahara has in 2007 been very difficult. Although the conflicts in these countries receive international attention now and then, they are unfortunately soon forgotten. SAIH supports these students’ struggle for democracy, human rights, freedom of speech, and the right to education.
Students in Norway are following the situation for the students in these countries closely, and cooperate with them in order to secure their freedom of organization and speech.
SAIH thinks that Norway should acknowledge and actively support students in their fight for human rights, democracy, freedom of speech, the right to education and organization.
You will find attachedaresolution that was passed at SAIH’s Annual Assembly in October 2007. The resolution has been sent to Standing Committee on Foreign Affairs at the Norwegian Parliament, and the Norwegian Ministry of Foreign Affairs.
ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ကျောင်းသားသမဂ္ဂများ အဖွဲ့ချူပ် (နိုင်ငံခြားရေးရာကော်မတီ) group mail မှ ရရှိ၍ ဖြန့်ချီထားပါသည်။
Posted by YeKyawAungMDY at 12:43 PM
By Mois้s Naํm
November/December 2007 (Foreign Policy Journal)
You can always count on the Olympic Games to provide drama. Next year’s games in Beijing will be no different; they too will produce powerful stories and riveting television. But this time the images will not just be athletes overcoming the odds or breaking records. They will also focus on the clashes between the Chinese police and the activists who will arrive from all around the world. The causes that motivate their activism range from human rights to global warming, from Darfur to Tibet, from Christianity to Falun Gong. The clashes outside the stadiums are likely to be more intense and spectacular than the sports competitions taking place inside. And the showdown will be captured as much by the videocameras in the cell phones of protesters and spectators as any news agencies’ camera crews. In fact, the Beijing Olympics will not just offer another opportunity to test the limits of human athletic performance; it will also test the limits ofacentralized police state’s ability to confrontanebulous swarm of foreign activists armed with BlackBerries. A governmental bureaucracy organized according to 20th-century principles will meet 21st-century global politics. Lenin meets YouTube.
The athletes are not the only ones training hard for the Olympics. The Chinese government and the activists are getting ready for the battle in Beijing, too. The Associated Press reports that China’s intelligence services, police, and government think tanks are compiling lists of foreign organizations and individuals in what has been described as one of the “broadest intelligence- collection drives Beijing has taken against foreign activist groups.” According to Xinhua, China’s official news agency, Zhou Yongkang, the minister of public security, has ordered the police during the games to “strictly guard against and strike hard at hostile forces at home and abroad.”
And the various “hostile forces” will test China’s mettle. In Prague, an organization called Olympic Watch was established in 2001 with the explicit mission of using the Beijing games as an occasion to challenge China’s policies on freedom of speech, the death penalty, Tibet, religious freedom, and forced labor camps. Darfur campaigners are calling the Beijing games the “Genocide Olympics” and are demanding that China stop supporting the Sudanese government. The Washington Post dubbed the games the “Saffron Olympics” to denounce China’s support for Burma’s murderous regime and the massacre of its saffron-clad monks.
This pressure is already on,alittle less thanayear before the games. What will happen when the games start and thousands of foreigners travel to Beijing not to watch the games but to try to change China? How will the authorities know that the old lady from Denmark is actually coming with her church group to protest China’s abortion policies, or that the young Australian couple is actually part ofamilitant environmental organization? In short, what if the $40 billion the government is spending to showcase modern China yields the ugly global image ofathuggish regime?
It’s fair to say that the Chinese government probably had no idea what it was getting into when it applied to host the Olympics in 2000. The world—and China’s place in it—have changed substantially since then, making the challenge for an authoritarian regime hosting the world games far greater than it might have imagined. Back then, Chinese companies had not yet become as active investing in pariah states that no other company would dare touch. In 2004, for example, China surpassed Iran to become the largest military supplier to Sudan. In 2005,anew pope tookastrong stance against China’s persecution of Christians and went as far as excommunicating the Catholic bishops sanctioned by the Chinese regime. China’s environmental degradation was far less ofaglobal concern seven years ago. Its exchange rate, tainted products, and aggressive trade practices had not become the lightning rod that they are now.
But perhaps the changes that most threaten China’s political performance during the Olympics are that the number of Chinese cell-phone users has boomed from 140 million to more than 600 million since 2001, while the number of Chinese Internet users has soared from 17 million to 162 million since 2000. Bloggers, chat rooms, social networks, and other online communities were far less prevalent seven years ago than they are today. And the development of Web-enabled cell phones that can double as videocameras is made even more politically consequential by the rise of YouTube, which was founded less than three years ago.
No public relations campaign, regardless of how massive, can alter reality. And the reality is that thousands of protesters with causes that enjoy public support around the world—and in China—will stage highly visible and creative protests during the Olympic Games. It is equally true that the Chinese government will try to suppress them. Inevitably, thousands of videocameras will record the ensuing battle. The path from the streets of Beijing to YouTube will be almost impossible for the regime to monitor and blockade.
Of course, the other option for the Chinese government is to agree to some of what the protesters demand. And slowly, modestly, it has already begun to do so by, for example, nudging Sudan to accept international peacekeepers. But the demands are too many and too varied. Many seek to alter the very nature of the regime and the political and economic power upon which it is based. Therefore, the government will inevitably attempt to control and repress the activists. And that will beanew and frustrating experience foracentralized government that is not used to containing well-organized, media-savvy foreigners who work through highly decentralized, international, nongovernmental organizations that know how to mobilize public opinion to advance their causes.
The 2008 Olympic Games promise to beagreat spectacle. And we will all be watching.
Mois้s Naํm is editor in chief of Foreign Policy
Posted by YeKyawAungMDY at 11:35 AM
``ဒီချူပ်-နအဖ အကြား နိုင်ငံရေးအာဏာပြဿနာ လွန်ပွဲ´´
ပြည်သူ့အာဏာ စာစောင်မှ ကူးယူဖော်ပြထားပါသည်။
(ဗကပ နှင့် နေ၀င်းစစ်အုပ်စု နှစ်၆၀ ဆက်ဆံရေးမှ ကောက်ချက်)
ဂျပန်ခေတ်ကတည်းက နေ၀င်းစစ်အုပ်စု နှင့် ဗကပ ဆက်ဆံခဲ့ရသည်။ လွတ်လပ်ရေးတိုက်ပွဲကာလ၊ ပြည်တွင်းစစ်ကာလမှ ယခုတိုင်ဆက်ဆံရခြင်းဖြစ်၍ နှစ်၆၀ခန့်ရှိပြီ။ ထိုဆက်ဆံမှုများကို အကျဉ်းရုံး တင်ပြပါသည်။ ကောက်ချက်လည်း ဆွဲပြပါသည်။ ပြိုင်ဘက်မှ ရန်ဘက်သို့ တိုးတက်သွားသည့်ဆက်ဆံရေးဖြစ်ပါသည်။
ထို့ကြောင့် စစ်အုပ်စုနှင့် ယှဉ်ပြိုင်နေကြသော နိုင်ငံရေး အင်အားစုများအတွက် အကိုးအကားပြုရန် အသုံးတည့်နိုင်ပါသည်။
၂၀၀၂ ခုနှစ်တွင် အပြောင်းအလဲ ရှိမည်ဟု ကမ္ဘာက နိမိတ်ဖတ်ကြပါသည်။ သူတို့လိုချင်သည့်ဘက်ဆွဲ၍လည်း ပြောကြပါသည်။ မလေးရှား၏ ရပ်တည်မှုနှင့် လုပ်နေသော ကုလသမဂ္ဂကိုယ်စားလှယ်၏ ပြောစကားကိုယူ၍ နိမိတ်ဖတ်ကြခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ပြည်တွင်းပြည်ပ လူပြိန်းတွေမပြောနှင့် ဒီချူပ် ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကပါ ၀င်၍ နိမိတ်ဖတ်သဖြင့် အတော်ကလေး ဂယက်ထခဲ့ပါသည်။
ဆင်းရဲဒုက္ခအပေါင်းက လွတ်ချင်နေသော ပြည်သူလူထုကလည်း ဤတချီတွင် အကောင်းဘက်သို့ ပြောင်းတော့မည်ဟု ထင်ခဲ့ကြပါသည်။ ဇန္န၀ါရီ (၄) ရက်ကို မျှော်ခဲ့ကြပါသည်။ သို့သော် မျှော်ရကျိုးမနပ်ပါ။
ဤအခြေအနေတွင် ဗကပ က ၀င်ပြောသင့်ပြီဟု ထင်ပါသည်။ အနုအကြမ်း တလှည့်စီသုံးပြီး စကားပြောပွဲသို့အရောက် ပို့ထားရသည့် စစ်အုပ်စု နောက်ပြန်လှည့်သွားမည်းစိုးသောကြောင့် ထုတ်ပြန်ချက်များ ထုတ်ပြီး `စကားပြောပွဲ` ကို အားပေးခဲ့ပါသည်။ ကြားက အဖျက်သဘောဝင်ပြောသလိုဖြစ်မည်ကို ရှောင်ခဲ့ပါသည်။
ပြည်တွင်းသာမက ကမ္ဘာကိုပါ စစ်အုပ်စုက လှည့်ဖြားလာသောကြောင့် နေ၀င်းစစ်အုပ်စု နှင့် နှစ်၆၀ နီးပါးဆက်ဆံခဲ့ရသော သမိုင်းကို တင်ပြပါမည်။ ကောက်ချက်ဆွဲ၍ ပြပါမည်။
ဆက်ဆံရေးအစ။ ၁၉၄၃ အကုန် ၁၉၄၄ အတွင်းဖြစ်ပါသည်။ ဂျပန်စစ်ရှုံးတော့မည်မှာ သေချာနေပါပြီ။ ဂျပန် နှင့် ကိုယ်ရောစိတ်ပါ ပေါင်းခဲ့သော ဗစိန်၊ ထွန်းအုပ်ဂိုဏ်းသား ဗိုလ်နေ၀င်း ဂနာမငြိမ် ဖြစ်လာပါသည်။ ဗိုလ်အောင်ဆန်းက ဘေးချိတ်ထားသည်ဟု ထင်ပြီးမကျေမနပ် ဖြစ်နေကြသည့် ဗိုလ်မောင်မောင်၊ ဗိုလ်အောင်ကြီး အစရှိသော ဗိုလ်များ နှင့် ဗိုလ်နေ၀င်း ပေါင်းမိပါသည်။ ဤသည်ပင် နေ၀င်း စစ်အုပ်စု၏ အစဖြစ်ပါသည်။
ဗိုလ်မောင်မောင်၊ ဗိုလ်အောင်ကြီးတို့မှာ ဗမာပြည် နိုင်ငံရေးလောကမှ ပင်မရေစီး (တို့ဗမာအစည်းအရုံး) နှင့် ကင်းကွာသူများမဟုတ်ပါ။ ကွန်မြူနစ်တို့၏ ဖက်ဆစ်ဆန့်ကျင်ရေး လှုပ်ရှားမှုကို သိပါသည်။ ဗိုလ်အောင်ဆန်း၏ ကွန်မြူနစ် သံယောဇဉ် အကြောင်းသိပါသည်။
ကွန်မြူနစ်များ တပ်တွင်း၌ လှုပ်ရှားနေသည်ကိုလည်း သိပါသည်။ ထို့ကြောင့် ကွန်မြူနစ် နှင့် အပြိုင်လုပ်ရန် ဗိုလ်နေ၀င်းကို စီမံကိန်းချ၍ ဆရာမွေးပါသည်။ ဗိုလ်နေ၀င်းမှာ နိုင်ငံရေးသိက္ခာ မရှိရုံမက ကိုယ့်ကျင့်တရားပါ ပျက်နေသူ ဖြစ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် သူ့ကို နိုင်ငံရေးသိက္ခာ တင်ပေးကြရ၊ ၀ိုင်းဝန်း၍ စိတ်ဓါတ်တင်ပေးကြရပါသည်။ ထိုအချိန်မှစ၍ ဗိုလ်နေ၀င်းသည် ဗိုလ်အောင်ဆန်းကို ကလန်ကဆန် လုပ်ဝံ့လာခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ဗိုလ်အောင်ဆန်းက သူ့ကိုမယုံပါ။ သခင်သန်းထွန်း၏ ပါတီတွင်း မိမိကိုယ်ကို
ဝေဖန်ရေးစာတမ်းတွင် သူ့အမှားကြီး နှစ်ခုကို ဖွင့်ပြောဖူးပါသည်။ ဦးဘဖေကို ဖဆပလ ထဲကို သွင်းမိသည့်အမှား (ဗိုလ်အောင်ဆန်းက ဒီအချောင်သမားကြီးကို ဖဆပလထဲထည့်လို့ ကောင်းပါ့မလားဟု ဇဝေဇ၀ါဖြစ်နေသည်) နှင့် ဗိုလ်နေ၀င်းကို ပြင်းပြင်းထန်ထန် အရေးယူမည်လုပ်သောအခါ ၀င်၍ဗိုလ်နေ၀င်းကို ကာကွယ်ပေးခဲ့မိသည့်အမှားဟု တင်ပြပါသည်။ အင်္ဂလိပ်ပြန်ရောက်လျှင် စစ်တရားခံဖြစ်တော့မည်ထင်ပြီး ကြောက်နေသော ဗိုလ်နေ၀င်းသည် ဗစိန်၊ ထွန်းအုပ်တို့ နှင့် လမ်းခွဲလိုက်နိုင်ပါသည်။
(ဗိုလ်အောင်ကြီးသည် ဗိုလ်နေ၀င်းအပါ် သူ့ကျေးဇူးရှိဖူးသည်ကို ခဏခဏပြောသဖြင့် ဗိုလ်နေ၀င်း မကြည်ပါ။ အခြေခိုင်သောအခါ ဗိုလ်အောင်ကြီးကို ကန်ထုတ်ပါသည်။ )
အတိုချူပ်သော် ဗိုလ်နေ၀င်းသည် လက်ဝဲ အုပ်စုအတွင်းသို့ လျော့ရိလျော့ရဲ ဖွဲ့စည်းထားသော ဆိုရှယ်လစ်ပါတီမှ တဆင့် ရောက်ပါသည်။ ဥာဏ်ကြီးရှင် ဦးကျော်ငြိမ်း၏ စီမံကိန်းဖြင့် ဦးသိန်းဖေ(မြင့်)က လက်ဝဲညီညွတ်ရေး လုပ်ရာတွင် ဥက္ကဌဖြစ်လာပါသည်။ (ဗိုလ်ရန်အောင် တို့ကို ထောင်မှလွတ်၍ လက်ဝဲညီညွတ်ရေး တမန်တော် အဖြစ် တောထဲသွားစေပါသည်။ ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီး အမိန့်မပါဘဲ ဤသို့ မလုပ်နိုင်ပါ။ ဤအထောက်အထားအရ ဦးကျော်ငြိမ်း စီမံကိန်းဖြစ်ကြောင်း သိသာပါသည်။ )
၁၉၄၄ က ဗိုလ်မောင်မောင်၊ ဗိုလ်အောင်ကြီး စီမံကိန်းကြောင့် လက်ဝဲဖြစ်လာသော ဗိုလ်နေ၀င်းသည် ၁၉၄၈ ဦးကျော်ငြိမ်း စီမံကိန်းဖြင့် လက်ဝဲညီညွတ်ရေး ဥက္ကဌဖြစ်လာပါသည်။ ဗိုလ်နေ၀င်းသည် ထိုစဉ်က နိုင်ငံရေးအာဏာကို မမျှော်မှန်းဝံ့ပါ။ ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီး နေရာမျှသာ မှန်းပါသည်။ ဦးကျော်ငြိမ်းတို့ကသာ နိုင်ငံရေးအာဏာရရေးကို မှန်းပါသည်။ ဦးနု၏ တာတေစနေသား နှင့် ဦးသိန်းဖေ(မြင့်) ၏ ကျော်ငြိမ်းစီမံကိန်း အပြည့်အစုံကိုတွေ့ရပါမည်။ ဦးကျော်ငြိမ်းသည် ဦးနု၏ ပျော့ကွက် နှင့် ဦးသိန်းဖေ(မြင့်)၏ ပရမ်းပတာလုပ်ဟန်ကို အသုံးချ၍ ဗိုလ်နေ၀င်းကို ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဖြစ်အောင်လုပ်ပေးနိုင်ခဲ့ပါသည်။
သို့သော် လွယ်လွယ်တော့မဟုတ်ပါ။ ဗိုလ်ဇေယျ တောခိုရပါသည်။ (ဗိုလ်)ဦးတင်ထွဋ် လုပ်ကြံခံရပါသည်။ (ဦးတင်ထွဋ်မှာ နိုင်ငံခြားရေး
၀န်ကြီးအဖြစ်မှ နုတ်ထွက်ပြီး စစ်ဗိုလ်လုပ်နေသူ ဖြစ်ပါသည်။ အပူတပြင်း လိုနေသော စစ်လက်နက်များ (အင်္ဂလိပ်လက်နက်) အိန္ဒိယ ထံမှရအောင် လုပ်ပေးနိုင်မည့်သူ ဖြစ်ပါသည်။ သူသည် ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးလုပ်နိုင်သူဖြစ်၍ ရှင်းပစ်ရသည်။)
ဗိုလ်နေ၀င်းကို စစ်တပ်အာဏာကိုင်ထားနိုင်သူဖြစ်အောင် ဆိုရှယ်လစ်များ ၀ိုင်း၍ ပင့်တင်ပေးလိုက်နိုင်ပါပြီ။
ဆက်ဆံရေးအလယ်။ ဖဆပလ နှစ်ခြမ်းကွဲသည်မှ စပါသည်။ `နိုင်ငံရေး အာဏာ´ သန့်ရှင်းယူမလား- တည်မြဲယူမလား- ပြဿနာ ပေါ်ပါသည်။
အစပိုင်းက `နိုင်ငံရေး အာဏာပြဿနာ´ မှာ အဓိကအားဖြင့် ဖဆပလနှင့် ကွန်မြူနစ်တို့၏ အားပြိုင်ပွဲဖြစ်ခဲ့သည်။ ၁၉၅၈ တွင် ဖဆပလ ကွဲသောအခါ `သန့်ရှင်း´ `တည်မြဲ´ အားပြိုင်ပွဲ အဖြစ် ပြောင်းသွားပါသည်။ ဦးနု၏ `သန့်ရှင်း´က မြေပေါ်ကွန်မြူနစ်ဟုဆိုသော
`ပမညတ´ အားကိုယူပြီး `နိုင်ငံရေးအာဏာ´လက်မလွတ်အောင်လုပ်ပါသည်။
`တည်မြဲ´တို့ ဆွေ့ဆွေ့ခုန် မခံမရပ်နိုင် ဖြစ်ကြပါသည်။ `ဦးကျော်ငြိမ်း စီမံကိန်းကြီး´ ရေစုန်မျောတော့မည်ကို စိုးရိမ်လာပါသည်။ ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးအာဏာဖြင့် တပ်တွင်းအင်အား စုစည်းမိပြီဖြစ်သော စစ်ဦးစီးချူပ် ဗိုလ်နေ၀င်းကို `နိုင်ငံရေး အာဏာ´အရယူ ခိုင်းပါသည်။ နေ၀င်း အိမ်စောင့်အစိုးရ ပေါ်ပါသည်။ ဗိုလ်နေ၀င်း၏လောဘကို တဆင့်တက်အောင် လုပ်ပေးသူများမှာ ဦးကျော်ငြိမ်းတို့ပင် ဖြစ်ပါသည်။ တည်မြဲက နိုင်ငံရေးအာဏာ မရလျှင် တည်မြဲဂိုဏ်းသား ဗိုလ်နေ၀င်း အာဏာရလျှင် ကျေနပ်ပြီဟု ဗြောင်ပင် ကြွေးကြော်ကြပါသည်။ ဗိုလ်နေ၀င်းကား `အိမ်စောင့်အစိုးရ´ ခေတ်တွင် `နိုင်ငံရေးအာဏာ´ အရသာ တွေ့သွားချေပြီ။ တိုင်းပြည်၏ ကံကြမ္မာကို အဆိုးဆုံးဘက်သို့ လှည့်စေတော့မည်။ ဖွတ်တကောင် မြစ်ထဲဆင်းမိပြီး မိချောင်းဖြစ်သည့်ကာလမှာ ၁၉၅၈ ခုနှစ်ဖြစ်သည်။
အိမ်စောင့်အစိုးရက ဗကပ ချေမှုန်းရေး ဇောက်ချလုပ်သည်။ သူတို့က မြေပေါ် ကွန်မြူနစ်ဟု ခေါ်သော ပမညတကို ဖိနှိပ်သည်။ ပမညတကား နာလန်မထူတော့ပါ။ ဗကပသည်လည်း ထိုကာလတွင် ရန်သူ့လက်ချက်ဖြင့် အထိနာဆုံးကာလဖြစ်ပါသည်။
`မြို့ပေါ်မှာ ကွန်မြူနစ်ရှားလို့ တောထဲသွား ပင့်ခိုင်းနေတာ မဟုတ်ဘူး၊ လက်နက်ချမယ်မပြောရင် သတ်ပစ်ခဲ့´ ဟု တရားဝင် အမိန့်ထုတ်ပြီး ချေမှုန်းပါသည်။ ဗိုလ်သိန်း၊ ဗိုလ်အာဠာဝက တို့ကို အရှင်မိပြီးမှ သတ်ပါသည်။
KNU ကိုတော့ ဗကပ ချေမှုန်းရေး အတွက် ဆွဲဆောင်ပါသည်။ ဗိုလ်အောင်ကြီးတို့ KNU နှင့် (၃) ကြိမ် လျှို့ဝှက် ဆွေးနွေးပါသည်။ ၁၉၄၈ က ဗကပကို `အစိုးရ၏ ကရင်တပ်ရင်း´များဖြင့် ချေမှုန်းရေးလုပ်ခဲ့သလို ၁၉၅၈ တွင် KNU အကူအညီဖြင့် တမျိုးတဖုံလုပ်လိုခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
ပမညတ နာလန်မထူတော့ခြင်းမှာ နေ၀င်းပေါ်လစီကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။ ပြတ်သားသူကို ချေမှုန်း (ကိုကိုးကျွန်းပို့သည်။) မပြတ်သားသူ သိမ်းသွင်း (သူတို့ အဖမ်းမခံရပါ။ နောင်တွင် မဆလကို အလုပ်အကျွေးပြုသူများ ဖြစ်လာသည်။)
၁၉၆၂ ခုနှစ်တွင် `နိုင်ငံရေး အာဏာ´ ပြဿနာကြောင့် ထိပ်တိုက်တွေ့မှု အသစ်ဖြစ်လာပါသည်။ ဤတချီတွင် ထိပ်တိုက်တွေ့သူများမှာ ပထစ နှင့် ဖက်ဒရယ်မူ လက်ခံသူများက တဖက် နေ၀င်းစစ်အုပ်စုက တဖက်ဖြစ်ပါသည်။
(၁၉၆၂၊ မတ်လ ၂ ရက်) မှာ နေ၀င်းစစ်အုပ်စု မွေးဖွားလာသည့် တိုင်းပြည်အတွက် မကောင်းဆိုးဝါးနေ့ ဖြစ်ပါသည်။
ဆိုရှယ်လစ်ပါတီမှာ ၁၉၆၀ ခုနှစ် ရွေးကောက်ပွဲတွင် မရှူမလှ ရှူံးခဲ့ပါပြီ။ ဦးကျော်ငြိမ်းမှာ အမတ်အဖြစ်ပင် အရွေးမခံရပါ။ နေ၀င်းသည် အမှီသစ်ရှာပါသည်။ ဦးနုကို တွေ့ပါသည်။ ဦးနု နှင့် ပေါင်းပြီး ဆိုရှယ်လစ် ထိပ်သီး ဗိုလ်အားလုံးကို နေ၀င်းက တပ်မှ ထုတ်ပါသည်။ သံအမတ်၊ စစ်သံမှူးခန့်၍ ပြည်ပ ပို့ပါသည်။ (နိုင်ငံရေးအာဏာမမြဲခင်က လုပ်နည်းပါ။ အာဏာမြဲတော့ တပ်မှထုတ်သူကို ထောင်ထဲပို့ ပါသည်။)
ဆိုရှယ်လစ်အုပ်စုမှ နေ၀င်းစစ်အုပ်စုသို့ အလှည့်အပြောင်း
ဆိုရှယ်လစ်ဗိုလ်များကို တပ်မှထုတ်ရသည်မှာ မလွယ်ပါ။ ဗိုလ်အောင်ကြီး သစ္စာဖောက်မှု နှင့် ဦးနုကို အယုံသွင်းနိုင်မှု ကြောင့် လုပ်နိုင်ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
ဗိုလ်နေ၀င်း၏ လုပ်ဟန်မှာ တခုကို ထိုးနှက်ဖို့ တခုကိုကပ်ခြင်း ဖြစ်သည်။ သူ့တွင် ကိုယ်ပိုင် နိုင်ငံရေးသြဇာ မရှိမှန်း၊ ပုဂ္ဂလိကစရိုက် မကောင်းမှန်း သူကိုယ်တိုင် သိပါသည်။ ထို့ကြောင့်ပင် အမှီရှာရသည်။ ဆိုရှယ်လစ်ဗိုလ်များကို ဖြုတ်စဉ် ဦးနုကို မှီရသည်။
ဦးနုကို မည်မျှကပ်၍ ပလီခဲ့သနည်း ဆိုသည်ကို အတိအကျမသိပါ။ သို့သော် ဦးနုကို အယုံသွင်းနိုင်ခဲ့သည်မှာ သေချာသည်။ ၁၉၆၂၊ မတ်လ ၂ ရက် ညက အဖမ်းခံနေရသော ဦးနုက ဗိုလ်နေ၀င်းအတွက် ပူပင်ခဲ့ရရှာသည်။ ဗိုလ်နေ၀င်းကိုပါ ဆိုရှယ်လစ်စစ်အုပ်စုက ဖမ်းထား ပြီဟု ထင်ခဲ့ရှာသည်။
ပထစများ `၁၉၆၀ ရွေးကောက်ပွဲ´ အောင်ပွဲရသောအခါ ၀န်းကြီးချူပ်ဦးနု၏ အိမ်အတွင်း မဏ္ဍပ်ကြီးထိုးပြီး အောင်ပွဲခံကြသည်။ တဦးပြီး တဦးထပြီး ဆိုရှယ်လစ် စစ်ဗိုလ်များ၏ ဘက်လိုက်မှုကို စွဲချက်တင်ကြသည်။ ဆိုရှယ်လစ်စစ်ဗိုလ်များ ဦးစီးသည့် တပ်မတော်ကို အဓိကရန်သူ ဟု ကြေညာကြသည်။ (ဤသို့ပြောနေကြသည်ကို ဦးနုက သူမကြားပါ၊ မသိပါဟု ဗြောင်လိမ်သည်။ အသံချဲ့စက်ဖြင့် အော်နေပြီး သတင်းစာတွေထဲ ပါနေသည်ကို မုချသူသိရမည်။)
ဗိုလ်နေ၀င်းအတွက်တော့ ဆိုရှယ်လစ်ပါတီကို သစ္စာဖောက်ရမည့် အချိန်ကောင်းမှန်းသိသွားပါသည်။ ထို့ကြောင့် ဆိုရှယ်လစ် စစ်ဗိုလ်များကို အစုလိုက် ထုတ်ပစ်လိုက်သည်။ ဗိုလ်တယောက်က နေ၀င်းကို ငိုယိုတောင်းပန်သည်ဟု ကြားရသည်။ နေ၀င်း၏ စရိုက်သည် လူမိုက်ဂိုဏ်း ဂိုဏ်းချူပ်၏ စရိုက်ဖြစ်သည်။ ရက်စက်စရာရှိလျှင် သူမတူအောင်ရက်စက်သည်။ ကတိကို လွယ်လွယ်ပေးပြီး လွယ်လွယ်ဖျက်သည်။ စကားကို တောင်စဉ်ရေမရပြောပြီး လူတွေကို လှည့်စားသည်။ ဆိုခဲစေမြဲစေမဟုတ်။
၁၉၆၂ တွင် နိုင်ငံရေးအာဏာကို ရလိုက်သော်လည်း နိုင်ငံရေးတည်ငြိမ်မှု မရှိပါ။ ဦးနု နှင့် အပေါင်းအပါများကို ထောင်ထဲထည့်ထား နိုင်သော်လည်း ဦးဗဆွေ၊ ဦးကျော်ငြိမ်းတို့ကို ငြိမ်အောင် မလုပ်နိုင်သေးပါ။ ကျောင်းသားများ `ဗကသ´ ကလည်း ၇ ရက်ဇူလိုင်တွင် အားစမ်းခဲ့သည်။ အကြမ်းဖက်နှိမ်နင်းနိုင်သော်လည်း စစ်အုပ်စု သွေးလန့်နေသည်။ (ယခုအထိ တရားခံလွဲချနေသည်ကို ကြည့်ပါ။)
ကျောင်းသားများသည် အခြေခံအားဖြင့် လက်ဝဲအင်အားစုများဖြစ်ရာ သူတို့ကို ချွေးသိပ်ဖို့လိုသည်။ လက်ယာအင်အားစု ဗဆွေ၊ ကျော်ငြိမ်း တို့ကို ထောင်ထဲပို့ရန်လိုသည်။ မိမိ အနီးမှ နံပါတ် (၂) ဗိုလ်အောင်ကြီးကလည်း ဦးဗဆွေတို့ နှင့် ခြေရှုပ်နေသည်။ ဆိုရှယ်လစ် ဗိုလ်ဟောင်းများလည်း နိုင်ငံခြားရောက်၊ နိုင်ငံခြားအဆက်အသွယ်ရှိနေသည်။ စိတ်မချရ။ မောင်မောင်၊ အောင်ကြီး ဆိုရှယ်လစ်စစ်အုပ်စု ပြန်ပေါ်နိုင်သည်။
မြီရှင် ဂျပန်ကလည်း စစ်တပ်က အာဏာ ရေရှည်သိမ်းမထားရန် တိုက်တွန်း နေသည်။ အိမ်နီးချင်း တရုတ်ပြည်ကလည်း ပြည်တွင်းစစ် ရပ်စဲရေး၊ ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးတည်ဆောက်ဖို့ ဗကပ နှင့် စေ့စပ်ဆွေးနွေးရန်တိုက်တွန်းနေသည်။
ဤသို့ဖြင့် အကြံသမားနေ၀င်းသည် လက်ဝဲနှင့်ပေါင်းပြီး လက်ယာကို ထိုးနှက်ရန် `စေ့စပ်ပွဲဆွေးနွေးပွဲ´ လုပ်ခဲ့ပါသည်။
ဗကပ နှင့် ဆွေးနွေးပွဲလုပ်ရန် အပူတပြင်း လိုအပ်နေသဖြင့် (ဒါမှ ဗဆွေ၊ ကျော်ငြိမ်း နဲ့ အပေါင်းအပါတွေ ထောင်ထဲထည့်နိုင်မယ်) အလျှော့ပေးမှုများ လုပ်ပါသည်။ သူ့အသံလွှင့်ဖိတ်ခေါ်ချက်ကိုပင်တည်းဖြတ်ခွင့် ပေးပါသည်။ တရုတ်ပြည်ရောက် ခေါင်းဆောင်များကို ပြန်လာခွင့်ပေးပါသည်။ ဗိုလ်ဇေယျ၊ သခင်ဗသိန်းတင်တို့နှင့် နှစ်ကိုယ်ကြား စကားများပြောပါသည်။ သခင်သန်းထွန်း နှင့် `ယုံကြည်မှု တည်ဆောက်´ ပါသည်။
ဆွေးနွေးပွဲ အောင်မြင်၍ ဗကပ သာ ရန်ကုန်ရောက်လာလျှင် သူတို့ ထူထောင်သည့် မဆလပါတီကို လွဲအပ်ပေးတော့ မယောင်ယောင်၊ သူက တပ်သို့ပြန်ပြီး နိုင်ငံရေးထဲ ၀င်မစွက်တော့ မယောင်ယောင်ပြော၍ မှာပါသည်။ ( သခင်သန်းထွန်း၏ ၂၀၊၈၊၆၃ ရက်စွဲပါ
သခင်သန်းထွန်းသည် ဦးသိန်းဖေမြင့်လို ပြောတိုင်းယုံသူမဟုတ်ပါ။ လက်တွေ့နိုင်ငံရေးတွင် ကျွမ်းကျင်သူဖြစ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ခြေလှမ်းပေါင်း မြောက်မြားစွာလှမ်းပြီး နေ၀င်းကို အကဲစမ်းပါသည်။ ရဲဘော်ဌေးခေါင်းဆောင်သည့် ပဏာမကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ လွှတ်ပါသည်။
ဗိုလ်နေ၀င်းသည် သူထောင်ထဲထည့်ချင်သောသူများကို ထည့်နိုင်ပြီး တိုင်းပြည်တခုလုံးကိုလည်း `ငြိမ်းချမ်းရေး´ `လှည့်ကွက်ဖြင့်´ ဖမ်းစားထားနိုင်သဖြင့် ပေါ်လစီချက်ချင်းပြောင်းကာ စေ့စပ်ဆွေးနွေးပွဲကို ဖျက် လက်ဝဲအင်အားစုများကို ဖမ်းလုပ်ပါသည်။ `ငါးမရလည်း ရေချိုးပြန်မယ်´ ဟု သဘောထားကာ စေံစပ်ရေးလုပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ဗဆွေ၊ ကျော်ငြိမ်း နဲ့ အပေါင်းအပါများ ထောင်ထဲထည့်ပြီးပြီဖြစ်၍ ရေချိုးပြီးပြီ။ ထို့ကြောင့် စေ့စပ်ဆွေးနွေးပွဲကို ဖျက်ပါသည်။
နေ၀င်စစ်အုပ်စု လုပ်ဟန်သည် လှည့်ကွက်လုပ် အချိန်ဆွဲရေး၊ အဆင်ပြေသလိုစခန်းသွားရေးဖြစ်ပါသည်။ ဗိုလ်နေ၀င်း၏ တပည့်သားမြေးများလည်း ဤအတိုင်းပင်လုပ်နေပါသည်။
သူတို့ကား ပြည်ချစ်နိုင်ငံရေး သမားများမဟုတ်ပါ။ နိုင်ငံရေးအာဏာကို တပ်မက်သော စစ်ဗိုလ်များသာဖြစ်ပါသည်။
နိုင်ငံရေးသမားကွဲလျှင်လူထုထောက်ခံမှုရရန် နိုင်ငံရေးအရ အပြန်အလှန် စွဲချက်တင်ကြပါသည်။ (၁၉၄၆ ဖဆပလ ကွန်မြူနစ် အကွဲ နှင့် ၁၉၅၈ ဖဆပလ အကွဲကို ကြည့်)
အာဏာသိမ်းစစ်ဗိုလ်များကွဲလျှင် အပြန်အလှန်စွဲချက်မတင်ပါ။ ပုတ်သင်ဥပေါ်မည် စိုးကြပါသည်။ နိုင်ငံရေးအရ ကွဲခြင်းမဟုတ်၍ ပြောစရာလည်း မရှိပါ။ ပြောဖို့လိုသည်လည်း မထင်ပါ။ သူတို့သည် လူထုထံမှ မဲတောင်းမည့်သူများမဟုတ်၍ လူထုကို ရှင်းလင်းတင်ပြနေစရာမလိုဟု သဘောထားပါသည်။ လူထုဆိုသည်မှာ အာဏာဖြင့် ငြိမ်-၀ပ်-ပိ-ပြား အောင်လုပ်ထားရမည့် သူများ ဟု သာ ယူဆကြပါသည်။
သူတို့သည် နိုင်ငံရေးအာဏာကို သိမ်းခဲ့သည့် ၁၉၈၈ ခုနှစ်တွင် လူထုအုံကြွစ အခါက အကြမ်းဖက်နှိမ်နင်းခဲ့သည်။ နှိမ်မရဘဲ လူထုနှင့် မျိုးချစ်ပြည်ချစ်တပ်မတော်သားများ ပူးပေါင်းမိမလိုဖြစ်သွားသည်။ ဤကိစ္စတွင် မျိုးချစ်တပ်မှူးဟောင်းများ၏ အခန်း အရေးပါသည်။
သူတို့သည် ဗိုလ်အောင်ဆန်းလို နိုင်ငံရေးသမားမှ စစ်ဗိုလ်ဖြစ်လာသူများ န၀တ-နအဖ စစ်အုပ်စုတွင် မရှိပါ။ နေ၀င်းက နိုင်ငံရေးစစ်ဗိုလ်ကို အပြတ်ရှင်းထားပြီးဖြစ်သည်။ ကြေးစားစစ်ဗိုလ်များကို မျိုးဆက်သစ်အဖြစ်ရွေးပြီး စစ်တပ်အာဏာအပ်ခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါသည်။
န၀တ-နအဖသည် နေ၀င်းစစ် အုပ်စု ပထမခေတ်ကလို နိုင်ငံရေးကစားရန် မလိုပါ။ ထို့ကြောင့် တိုင်းရေးပြည်ရေး၊ နိုင်ငံရေး စကားမပြောပါ။ (ငြိမ်းအဖွဲ့ များကို တို့နိုင်ငံရေးသမားမဟုတ်ဘူး၊ နိုင်ငံရေးစကားလာမပြောနဲ့၊ နိုင်ငံရေးအစိုးရဖြစ်မှ ပြောကြဟု အမြဲတမ်း နှုတ်ပိတ်ပစ်လေ့ရှိပါသည်။)
သူတို့အလေးထားသည်မှာ `နိုင်ငံရေးအာဏာပြဿနာ´ ဖြစ်ပါသည်။ `နိုင်ငံရေးအာဏာ´အတွက်ပင် ဒီချူပ်နှင့် စကားပြောနေခြင်းပင် ဖြစ်ပါသည်။`နိုင်ငံရေးအာဏာ´တွင် ဒီချူပ် နှင့် နအဖ `နိုင်ငံရေးအာဏာ´ကို မည်သူက ကိုင်တွယ်မလဲဆိုသော ပြဿနာကို မရှင်းနိုင်သမျှ ဘာမှဖြစ်မြောက်မည် မဟုတ်ပါ။
ဗိုလ်နေ၀င်းသည် အာဏာပိုင်ရှင် အစစ်အမှန်သည် ပြည်သူလူထုဖြစ်သည်ဟု ပြောဝံ့ပါသည်။ နောက်မှ လုပ်ချင်ရာ လုပ်ပါသည်။ သူလည်း တခါက နိုင်ငံရေးသမားစစ်ဗိုလ်ဖြစ်ခဲ့သောကြောင့်ပါ။
ယခု `ကြေးစားစစ်အုပ်စု´ မှ ဤသို့ပင် မပြောဝံ့ပါ။ သူတို့က ပို၍လက်တွေ့ကျပါသည်။ သူတို့ရေးထားသော အခြေခံဥပဒေကို ဒီချူပ်သို့ အတင်းထိုးပေးနေပါသည်။ ဒီချူပ် နှင့် နအဖ အကြားမှ ပြဿနာမှာ ယုံကြည်မှုတည်ဆောက်ရေး ပြဿနာ မဟုတ်ပါ။ `နိုင်ငံရေး အာဏာ ပြဿနာ´ (အခြေခံဥပဒေ ဘယ်သူဆွဲမလဲ ဘယ်လိုဆွဲမလဲ ပြဿနာ) ဖြစ်ပါသည်။ လက်တွေ့ အာဏာကိုင်ထားသူ က အဓိကလား- မဲဆန္ဒအရ၊ တရားဥပဒေအရ အာဏာပိုင်ခွင့်ရသူက အဓိကလား- ဆိုသော ပြဿနာ ဖြစ်ပါသည်။
ဒီချူပ်ဆုံးဖြတ်ချက် (၇)ချက်မှာ တောင်းဆိုချက်ချည်းဖြစ်ပါသည်။ တောင်းနေရသူသည် အာဏာပိုင် မဟုတ်ပါ။
၂၅ ရာခိုင်နှုန်း ဒီလောက်လိုချင်လှတာ ပေးလိုက်ပါဟု ပြောသူများသည် `နိုင်ငံရေးအာဏာ´သဘော နားမလည်သူများ ဖြစ်ပါသည်။
စစ်အုပ်ချူပ်ရေးမှ ဒိုင်အာခီ -၉၁ ဌာန အုပ်ချူပ်ရေးသို့ တဆင့်ချင်းသွားသော နှစ် (၅၀)ကျော် အင်္ဂလိပ် လုပ်ခဲ့သည့်နည်းကို `ကြေးစားစစ်အုပ်စု´ လုပ်နေခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ၉၁ ဌာန အုပ်ချူပ်ရေးတွင် ၂၅ ရာခိုင်နှုန်းကို အင်္ဂလိပ်က မယူပါ။ အမတ်နေရာအားလုံး ၁၃၂ မှာ ကုလား အမတ်(၈)၊ အင်္ဂလိပ်အမတ်(၃) နဲ့ အင်္ဂလိပ်ကပြား (၂)ယောက်ကိုပဲ အပိုင်ယူထားသည်။ ထိုအမာခံအမတ်များ နှင့် လွှတ်တော်ကို ချယ်လှယ်သွားပါသည်။ ၁၉၃၈ မှ ၁၉၄၁ အထိ သုံးလေးနှစ်အတွင်း အစိုးရအဖွဲ့ (၃)ဖွဲ့ပြောင်းစေခဲ့ပါသည်။ (ဒေါက်တာ ဗမော်၊ သယာဝတီဦးပု၊ ဂဠုန်ဦးစော) ဘုရင်ခံက ဗီတို ကိုင်ထားပါသည်။ ယခုစစ်အုပ်စုက ဗီတို အာဏာယူထားပါသည်။
ဗကပ က `အာဏာပြဿနာကို´ လွယ်လွယ်မစဉ်းစားပါ။ ဗိုလ် (ဒေါက်တာ) မောင်မောင် အချိန်ဆွဲနေစဉ်က စစ်အုပ်စုက စစ်ရေးပြင်ဆင်မှုများ ကျိတ်ပြီးလုပ်နေသည်ကို ဗကပ ကိုယ့်နည်းနှင့်ကိုယ် သိနေခဲ့ပါသည်။ ဗိုလ် (ဒေါက်တာ) မောင်မောင်ပြောတာ လက်ခံလိုက်ရင် အကောင်းသားဟု တစ်ချို့ပြောနေသံကြားရပါသည်။ နအဖ ပေးသလောက် နှင့် တင်းတိမ်လိုသောသူများထံမှ အာဘော်ဖြစ်ပါသည်။
နအဖ အချိန်ဆွဲနေပါသည်။ တဖက်က စစ်တပ်ကို ပြင်နေပါသည်။ အကောင်းဘက်ဖြစ်နိုင်သလို အဆိုးဘက်သို့ သွားနိုင်ပါသည်။
`နိုင်ငံရေးအာဏာ´ပြဿနာ မပြေလည်သမျှ ဘာကိုမှ စိတ်ချ၍မရပါ။ `နိုင်ငံရေးအာဏာ´ ပြဿနာ ပြေလည်ဖို့
(၁) စစ်အုပ်စု (နအဖ)ကို ဖျက်သိမ်းရမည်။ နောက်ထပ် `န´ တလုံး (န၀တ၊ နအဖ အပြီးတွင် နိုင်ငံတော်ဖြင့်စသော အဖွဲ့တဖွဲ့) မလိုတော့ပါ။
(၂) စစ်အစိုးရ ဖျက်ရမည်။ ဒီမိုကရေစီအစိုးရဖြင့် အစားထိုးရမည်။
(၃) တပ်မတော်ကို ပြုပြင်ရမည်။
ဤသုံးခု မရှိလျှင် စိတ်မချရပါ။ ဗိုလ်နေ၀င်းမရှိရုံမျှဖြင့် စစ်အုပ်စု ပျောက်မသွားနိုင်ပါ။ ပြည်သူများ သတိရှိရမည်ဖြစ်ပါကြောင်း။ ။
ဒီချူပ် နှင့် နအဖ `နိုင်ငံရေးအာဏာ´ကို မည်သူက ကိုင်တွယ်မလဲဆိုသော ပြဿနာကို မရှင်းနိုင်သမျှ ဘာမှဖြစ်မြောက်မည်မဟုတ်ပါ။
Posted by YeKyawAungMDY at 2:45 PM
Myanmar News Agency via AFP/Getty Images
Posted by YeKyawAungMDY at 12:09 AM
from Mr Balance (www.mrbalance.blogspot.com)
၁၉၉၇ ခုနှစ်မှာ ဗကသများ အဖွဲ့ချုပ်မှ တာဝန်ခံထုတ်ဝေခဲ့တဲ့
၁၉၉၆ ဒီဇင်ဘာကျောင်းသားလှုပ်ရှားမှုနှင့် ပတ်သတ်၍ ကျောင်းသားထုသို့ အစီရင်ခံချက်ကို ဒီနေရာကနေ ရယူနိုင်ပါတယ်။
နိဒါန်းစကားအဖြစ် ပြင်သစ် နိုင်ငံရေးတွေးခေါ်ပညာရှင် ပီ၊ ဂျေ ပရိုဒွန် ရဲ့
“ငါတို့ဒူးထောက်နေ၍သာ ကြီးကျယ်သူတွေ ကြီးကျယ်နေကြတာပါ။ ငါတို့ထကြစို့”
ရှစ်လေးလုံးအရေးတော်ပုံကြီး၏ ရှစ်နှစ်မြောက်အရေးတော်ပုံကာလ ၁၉၉၆-ဒီဇင်ဘာလတွင် လက်ရှိ န၀တစစ် အစိုးရ၏ ပညာရေးစနစ်ကို ရှုတ်ချဆန့်ကျင်သည့် ကျောင်းသားထုအခွင့်အရေးတိုက်ပွဲကြီး ပေါ်ပေါက်ခဲ့လေပြီ။ ကျောင်းသားသမဂ္ဂ ဖွဲ့စည်းရေးအပါအ၀င် ပညာရေးလွတ်လပ်ခွင့်များကို တညီတညာတည်းထုတ်ဖော်တင်ပြ တောင်းဆိုခဲ့ကြသည့် ... ... ...
Posted by YeKyawAungMDY at 3:35 PM
(cc dacing_star 2007)
Posted by YeKyawAungMDY at 12:56 PM
Myanmar Par Par Lay / Daw Ahmar risk lives to speak out
Posted by YeKyawAungMDY at 3:21 PM
ရဟန်းသံဃာ၊ ကျောင်းသား၊ ပြည်သူတွေကို ဖိနှိပ်ရိုက်နှက် သတ်ဖြတ်ပြီး အစအနမကျန်အောင် ရှင်းတယ်။ ရဟန်း၊ကျောင်းသား၊ ပြည်သူငြိမ်နေလို့ နအဖဟာ သူတို့လုပ်ချင်သလိုလုပ်လို့ရပြီလို့ထင်နေတယ်။ နအဖ ဟာ သဘာဝနိယာမတစ်ခုကို မေ့နေတယ်။ အဲဒါဟာ ဖိနှိပ်လေ အုံကြွလေ ဆိုတဲ့ သဘောတရားပါ။ အဲဒီသဘောတရားဟာ အမြဲမှန်ကန်နေတဲ့ နိယာမတစ်ခုပါ။ ဖိနှိပ်လေ၊ တော်လှန်ရဲတဲ့စိတ်ဓါတ်ပိုလို့ ခိုင်မာလေပဲ။ အဲဒီတော်လှန်ရဲတဲ့ စိတ်ဓါတ်၊ ခိုင်မာတဲ့စိတ်ဓါတ်တွေနဲ့ ကျနော်တို့ ပိုလို့တောင်သွေးစည်းနေကြပြီ။ အဲဒီ သွေးစည်းမှုတွေနဲ့အတူ ကျနော်တို့ စစ်အာဏာရှင်ကို ဖြိုလှဲကြမယ်။ ကျနော်တို့ အောင်ပွဲဟာ လက်တစ်ကမ်းမှာပါ။ ကျနော်တို့ လှမ်းယူရဲဖို့ပဲလိုတော့တယ်။
Posted by YeKyawAungMDY at 7:01 PM
ယနေ့ ထိုင်းနိုင်ငံ ဘန်ကောက်မြို့ ၀တ်မဟာထပ်ကျောင်းတော်ရာမှာဗမာပြည်မှာ ဒီမိုကရေစီအရေးအတွက် အသက်ပေးသွားသူများအတွက် အမျှဝေဆုတောင်းပွဲကို အဝေးရောက်ကျောင်းသူကျောင်းသားများစုပေါင်းပြီးပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်..ယင်းအခမ်းအနားကို တက္ကသိုလ် အသီးသီးမှကျောင်းသူကျောင်းသားများတက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်..ယင်းတက္က သို လ်များမှာ ABAC ခေါ် Assumptio Vniversity, Saint John's University, Rangsit Univ, Ramkamhaen Univ, Thamasat Univ နှင့် Mahidol Univ တို့မှ ဖြစ်သည်..ယင်းကျောင်းသူ ကျောင်းသားများသည် ဗမာသံရုံးသို့ဆက်လက် သွားကြပြီး ငြိမ်သက်စွာ ဆန္ဒပြခဲ့ကြသည်။ ထူးခြားသည်မှာ ၀တ်မဟာထပ်ဆရာတော်မှ ၈၈-ခုနှစ်ကလည်း ယခုလို ထိုင်းနိုင်ငံရောက်မြန်မာများ စုပေါင်းကုသိုလ်လုပ်ကြကြောင်း။ ဒကာမတစ်ယောက်ဒဏ်ရာ အပြင်းအထန်ဖြင့်ဆေးဝါးကုသမှု့ခံယူနေစဉ်မှာ ဆရာတော်မှ လိုလေသေးမရှိထောက်ပံ့ကူညီသည့်အပြင်တစ်ရက်ခြား နှစ်ရက်ခြားသွားရောက်ကြည့်ကာ အားပေးလေ့ရှိကြောင်းဆရာတော်မှပြန်ပြောင်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။ယင်းအမျိုးသမီးလည်း ဒဏ်ရာကတစ်မျိုး ကင်ဆာရောဂါကတစ်ဖက်ဖြင့် နောက်ဆုံးတွင် ကွယ်လွန်သွားပါသည်။ ထိုသို့ရောဂါဖြင့်ကွယ်လွန်သည်ကို နအဖ အစိုးရက AIDS ရောဂါဖြင့် ဆုံးသည် ဟု ယုတ်မာ ပက်စက်စွာ စွပ်စွဲခဲ့ကြောင်းကိုလည်း ဆရာတော်မှ စိတ်မကောင်းစွာ ပြောကြားခဲ့ပါသည်..ပိုဝမ်းနည်းစရာကောင်းသည်မှာဒကာမ,မဆုံးခင်ဆရာတော်အားကျေးဇူးဆပ်သည့်အနေဖြင့်သူမအမြဲပူဇော်နေကျ ၆.လက်မခန့်ဆင်းတုတော်တစ်ဆူနှင့်ရွတ်ပွား နေကျပဋ္ဌာန်းစာအုပ်လေးတစ်အုပ်ကိုနောက်ဆုံးအနေဖြင့်လှုသွားခဲ့ပါသည်။ယင်းစာအုပ်နှင့် ဆင်းတုတော်အားယနေ့လာရောက် ကုသိုလ်ပြု အမျှဝေသူများအား လွှဲပြောင်းပေးအပ်ခဲ့ပြီး "ငါထိန်းသိမ်းလာခဲ့တာ ၁၇-နှစ်ကျော် လာခဲ့ပြီ..နင်တို့လူငယ်လေးတွေ အဲဒါကို အသေအချာသိမ်းဆည်းကြပါ"လို့ဝမ်းနည်းကျေကွဲစွာဖြင့်မိန့်ကြားခဲ့ပါသည်..ယင်းဆင်းတု တော်လေးသည်အလွန်သပ်ပယ်လှပြီးဂျပန်လက်ရာပုံဟုထင်ရသည်..ဒီလိုဝမ်းနည်းစရာ တွေဟာ ဒီစစ်အာဏာရှင်တွေ မပြုတ်မခြင်း ဒို့ပြည်သူတွေ ကြုံတွေ့နေရမှာပါ..ဒါကြောင့် ဒီအာဏာရှင်တွေ အမြန်ဆုံးနည်းနဲ့ပြုတ်ဖို့ ဒို့ပြည်သူတိုင်းမှာ တာဝန်ရှိပါတယ်...ဒါဟာ နိုင်ငံရေးမဟုတ်ပါဘူး..လူမျိုးရေးပါ..(နအဖရဲ့ ညှင်းဆဲမှုကိုကြောက်ပြီး" နိုင်ငံရေး"ဆို မပါရဲသူတွေအတွက်စကားလုံးပါ)....မြန်မာနိုင်ငံကြီးစစ်အာဏာရှင်လက်ကအမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်ပြီးအမြန်ဆုံးလွတ်လပ်ချမ်းသာတိုးတက်ပါစေ။။။
Posted by YeKyawAungMDY at 6:52 PM
(ဗကသများအဖွဲ့ချူပ်-နိုင်ငံခြားရေးရာကော်မတီရဲ့ သမဂ္ဂစာစဉ် အတွဲ(၁)၊ အမှတ်(၃) ဇူလိုင်လ ၂၀၀၅ မှ ပြည်လည်ကူးယူဖော်ပြထားသည်။)
‘‘ဓါးကို ဓါးချင်း၊ လှံကို လှံချင်း၊ တုန့်နှင်းရမယ်’’
ဒင်းပြောခဲ့တဲ့စကား၊ နားဝမှာ ကြားဆဲ
အလောင်းမြေကျ၊ ဒေါင်းအခြေမလှခဲ့ .......
7 july သွေးအိုင်ထွန်းခဲ့ရတဲ့နေ့
အသက်ထွက်ခဲ့ရတဲ့ ကျောင်းသား ရာပေါင်းများစွာတွေ
ငမိုက်ကောင် ဒင်းတို့ကို၊ လက်စားချေရတဲ့ကိုယ်
ဒင်းတို့ဖြိုချ၊ ပြိုခဲ့ရတဲ့ သမဂ္ဂကျောင်းဆောင်
(၂၆)နှစ် ခေတ်တခေတ် ကြာတဲ့အခါ
သူတို့တွေ လူပြန်ဖြစ်၊ မျိုးဆက်အသစ်နဲ့
ဒီခေတ်က ကျူပ်တို့ပဲဟေ့။ ။
Posted by YeKyawAungMDY at 8:36 PM
အာဏာရှင်ကို လူသတ်ဖို့ ညွှန်ကြားသူ အသံရှင် ဘယ်သူလဲ
www.mizzimaburmese.com မှ ပြန်လည်ကူးယူဖော်ပြထားပါသည်။
အောက်တိုဘာ ၁၆ ရက်၊ ၂ဝဝ၇ ခုနှစ်
အခုတလော အင်တာနက် သတင်းတွေမှာ အာဏာရှင်တွေကို လူသတ်ဖို့ အကြံပေးတဲ့ ဆရာတော် တပါးရဲ့ အသံဖိုင်ကို နားထောင်ရလို့ တုန်လှုပ်မိပါတယ်။ ဒါလောက် ဗုဒ္ဓသာသနာကို စော်ကားရဲတဲ့ အသံရှင် ‘ဆရာတော်’ ဆိုသူဟာ ဘယ်သူလဲ ဆိုတာကိုလည်း အတိအကျ သိချင်လာပါတယ်။
ဒါကြောင့် ပြည်တွင်းပြည်ပမှာ ရှိတဲ့ မိတ်ဆွေ ရဟန်းတချို့ကို ရနိုင်သမျှ စုံစမ်းကြည့်ပါတယ်။ သူတို့ အားလုံးကတော့ ပဲခူးက ဆရာတော် တပါးရဲ့ အသံပဲလို့ ပြောကြပါတယ်၊ အာဏာရှင်တွေရဲ့ လုပ်ကြံ ဖန်တီးမှုလည်း ဖြစ်နိုင်တာမို့ စာရေးသူ အနေနဲ့တော့ အသံရှင် ဆရာတော် ဆိုသူကို ကိုယ်တိုင်လည်း မမြင်ဖူး၊ အသံကိုလည်း အပြင်မှာ တခါမှ မကြားဖူးတဲ့အတွက် အသံရှင် ပုဂ္ဂိုလ်ဟာ ဘယ်သူဘယ်ဝါ ဖြစ်တယ်လို့ ယတိပြတ် မပြောလိုပါဘူး။
ဒါပေမဲ့ အသံဖိုင်မှာ ပါတဲ့အတိုင်း ဆိုရင် အသံရှင် ဘုန်းကြီးဟာ “ခမဲပြင် နိဗ္ဗာန်ကားလမ်းကို ဦးစီးပြီး ဖောက်လုပ်တယ်။ မီးရထား ဝန်ကြီးက သူ့ကို ကူညီ ပေးတယ်လို့ နားလည်ရပါတယ်။ ပရိသတ်ထဲမှာ ပါနေတဲ့ ယခု မီးရထားဝန်ကြီး “အောင်မင်း“ ဟာ အရင်တုန်းက တောင်ပိုင်းတိုင်းမှူး ဖြစ်ခဲ့တာမို့ ပဲခူးတိုင်း၊ ကဝမြို့နယ်က ခမဲပြင်ရွာနဲ့ နိဗ္ဗာန်ရွာ ကားလမ်းကို ရည်ညွှန်းတာ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ အသံဖိုင်မှာ “ဆရာတော့် ကျောင်းမှာ သံဃာ တထောင်ကျော် တထောင့် နှစ်ရာလောက် နေ့တိုင်း ဆိုရတယ်၊ ကဲ ... လိုက်ဆိုစမ်း” လို့လည်း ဆိုထားပါတယ်။
ဒါကြောင့် အသံရှင်ဟာ ပဲခူးနယ်က သံဃာ ၁၂ဝဝ လောက်ရှိတဲ့ ကျောင်းတိုက်ကြီး တခုက ပုဂ္ဂိုလ် ဖြစ်ပါတယ်။ ဝန်ကြီးနဲ့ တိုင်းမှူး အဆင့်ရှိတဲ့ လူတွေကို စကားပြောခွင့် ရတာမို့လို့ အဲဒီ ကျောင်းတိုက်ရဲ့ အဓိက ပုဂ္ဂိုလ်ပဲ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ အသံရှင်ဟာ မည်သူပင် ဖြစ်စေ သူ့လုပ်ရပ်က သံဃာထု တရပ်လုံးကို သိက္ခာကျစေတာ ဖြစ်လို့ ငြိမ်မနေသင့်ပါဘူး။ အသံရှင် အစစ်အမှန်ကို သိဖို့ထက် သူလုပ်တဲ့အလုပ် မမှန်တာကို ထောက်ပြဖို့က ပိုအရေးကြီးတယ်လို့ ယူဆပါတယ်။
အသံရှင်က အာဏာရှင်တွေကို ပြောတဲ့စကားကို စဉ်းစားကြည့်ပါမယ်။
အသံရှင်ဘုန်းကြီးက ပရိသတ်ကို - “အတိုက်အခံတွေဟာ ခင်ဗျားတို့ရဲ့ မိတ်ဆွေလား၊ ရန်သူလား” လို့ မေးပြီး အသံရှင်ကိုယ်တိုင် “ရန်သူ” လို့ ရှေ့က ဖြေလိုက်တော့ ... အာဏာရှင် ပရိသတ်က “ရန်သူပါ ဘုရား” လို့ လိုက်ပြီးတော့ အော်တယ်။
အဲဒီနောက် အသံရှင်က “မီးကြွင်း မီးကျန်လည်း မထားနဲ့၊ ရန်ကြွင်း ရန်ကျန်လည်း မထားနဲ့။ မြန်မြန်ဖြတ်၊ ပြတ်တဲ့နည်းနဲ့ ဖြတ်၊ လွှနဲ့ ပြတ်ရင် လွှနဲ့ဖြတ်၊ တုတ်နဲ့ပြတ်ရင် တုတ်နဲ့ဖြတ်၊ ဓားနဲ့ပြတ်ရင် ဓားနဲ့ဖြတ်၊ ပုဆိန်နဲ့ပြတ်ရင် ပုဆိန်နဲ့ဖြတ်၊ လက်သီးနဲ့ပြတ်ရင် လက်သီးနဲ့ဖြတ်။ ဝန်ကြီး ... မြန်မြန်ဖြတ်ဆိုတာ နားလည်သွားပြီလား” လို့ ဆက်မေးတယ်။ ဝန်ကြီးဆိုသူနဲ့ အပေါင်းပါတွေက “နားလည်ပါပြီ ဘုရား“ တဲ့။ အတိုင်အဖောက် ညီလိုက်တဲ့ ဖြစ်ခြင်း။ ဝန်ကြီးတွေကိုတောင် သြဝါဒ ပေးခွင့်ရှိတဲ့ သံဃာ့ ခေါင်းဆောင် ဆရာတော် တပါးရဲ့ နှလုံးသားဟာ ဒါလောက် အောက်တန်းကျပြီး မယုတ်မာသင့်ပါဘူး။ “ကိုယ့်မျက်လုံးကို ဖောက်ရင် သူ့မျက်လုံးကို ပြန်ဖောက်၊ ကိုယ့်နံရိုးကို ချိုးရင် သူ့နံရိုးကို ပြန်ချိုး၊ ကိုယ့်သွားကို ချိုးရင် သူ့သွားကို ပြန်ချိုး” လို့ဆိုတဲ့ လက်စားချေ တရားနဲ့ ဘာထူးသေးလဲ။ “လူဖြစ်ချင်ရင် လူ့အရည်အချင်း ရှိရမယ်” လို့ ပြောတဲ့ အသံရှင်ကို လူ့အရည်အချင်းဆိုတာ ဘာလဲ၊ ကိုယ်တိုင်ကော လူ့အရည်အချင်း ရှိရဲ့လားလို့ ပြန်မေးရလိမ့်မယ်။
အသံဖိုင် တခုလုံးရဲ့ လိုရင်းကတော့ အတိုက်အခံတွေကို ရန်သူလို့ သတ်မှတ်ပြီး ကျူပင်ခုတ် ကျူငုတ်မကျန် ချေမှုန်းပစ်ဖို့ အာဏာရှင်တွေကို “ဆရာတော်” ဆိုသူ အသံရှင်ဘုန်းကြီးက “လမ်းညွှန်တာ၊ တိုက်တွန်းတာ၊ အားပေးတာ၊ သတ်ပစ်ဖို့ ခိုင်းတာ” ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အသံရှင် ဘုန်းကြီးဟာ ဘယ်နည်းနဲ့မှ လူ့အရည်အချင်းရှိတဲ့ သူတော်ကောင်း ပုဂ္ဂိုလ် မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။
(၁) လမ်းပေါ်မှာ မေတ္တာ ပို့နေကြတဲ့ ရဟန်းတော်တွေဟာ လူသားစင်စစ် ဖြစ်ပါတယ်။
(၂) သူတို့တွေ အသက်ရှင်နေတယ် ဆိုတာကိုလည်း အသံရှင်ဘုန်းကြီး သိပါတယ်။
(၃) “ဒုတ်နဲ့ ဖြတ်၊ ဓားနဲ့ ဖြတ်၊ ပြတ်တဲ့နည်းနဲ့ ဖြတ်” လို့ အူလှိုက်သဲလှိုက် ပြောလိုက်တဲ့ အသံရှင်ရဲ့ စကားထဲမှာ သေစေလိုတဲ့ စေတနာ မပါဘူးလို့ ငြင်းလို့ မရပါဘူး။
(၄) အဲဒီလို ရန်သူကို အမြစ်ပြတ် ရှင်းပစ်ဖို့ အာဏာရှင်တွေကို ညွှန်ကြားတဲ့အခါ လက်နက် အမျိုးအစား၊ အချိန်ကာလ၊ နေရာဒေသ စတဲ့ သတ်မှတ်ချက်တွေ မပါလို့ အာဏာရှင်ရဲ့ လက်ပါးစေ လူသတ်သမားတွေက ဘယ်နေရာ၊ ဘယ်အချိန်၊ ဘယ်လက်နက်၊ ဘယ်နည်းနဲ့မဆို ဘယ်သူ့ကိုပဲ သတ်သတ် စေခိုင်းသူ အသံရှင်ဘုန်းကြီးရဲ့ ပယောဂ မကင်းတာ သေချာပါတယ်။
(၅) ရဟန်းသံဃာတွေ၊ လူတွေ သေနတ်နဲ့ ပစ်ခံရ၊ ဒုတ်နဲ့ ရိုက်ခံရ၊ နည်းမျိုးစုံ နှိပ်စက်ခံရလို့ လမ်းပေါ်မှာ တမျိုး၊ မြစ်ထဲမှာ ပေါလောမျောလို့ တဖုံ၊ လူမသိ သူမသိနဲ့ပါ သေကြေတာကို ကမ္ဘာ အရပ်ရပ်က ရုပ်မြင်သံကြားတွေ၊ အသံလှိုင်းတွေမှာ သန်းချီတဲ့လူတွေ မြင်ရကြားရပြီး ဖြစ်ပါတယ်။ ဘာမှ အပြစ်မရှိတဲ့ ဂျပန် သတင်းထောက်ကို အာဏာရှင် လက်ပါးစေတွေက သေနတ်နဲ့ ပစ်သတ်လိုက်ပုံ အသေးစိတ်ကို ကမ္ဘာ့ ရုပ်မြင်သံကြားတွေမှာ ပြသတာကို တွေ့မြင်ရလို့လည်း တကမ္ဘာလုံးက လူတွေ မျက်ရည်ကျမတတ် ခံစားခဲ့ကြရပါတယ်။
ဒါကြောင့် ရဟန်းသံဃာနဲ့ လူတွေကို အပြတ် ရှင်းပစ်ဖို့၊ သတ်ပစ်ဖို့ အာဏာရှင်တွေကို လမ်းညွှန် သြဝါဒပေးတဲ့ အသံရှင် ဘုန်းကြီး အနေနဲ့ ဝိနည်းကို သင်ဖူးတယ်ဆိုရင် ဖော်ပြထားတဲ့ “လူသတ်အင်္ဂါ ငါးရပ်” နဲ့ ပြည့်စုံနေလို့ မိမိဟာ ရဟန်းကောင်း၊ ရဟန်းစစ် မဟုတ်တော့ဘူး ဆိုတာကို ကိုယ့်ဟာကိုယ် သိနေလောက်ပါပြီ။ အသံဖိုင်ထဲက တချို့ စကားလုံးတွေဟာ သူတော်ကောင်း ရဟန်းတွေ ပြောဆိုကောင်းတဲ့ စကားမျိုး မဟုတ်ပါဘူး။ အာဏာရှင်ကို ဒံပေါက်ထုပ်ကလေး ပေးလိုက်နိုင်တာကို “ဖား” စိတ်နဲ့ အသားယူ ပြောတာမျိုး၊ “ဝန်ကြီး” “ဗိုလ်ချုပ်ကြီး” စတဲ့ မြှောက်ကော် ဝေါဟာရတွေနဲ့ ခေါ်ဝေါ် သုံးနှုန်းတာမျိုးတွေကြောင့် အလှူပစ္စည်း ရအောင်ကြံတတ်တဲ့ “ကုဟက” “လပက” လို့ ခေါ်တဲ့ ကောက်ကျစ် စဉ်းလဲတဲ့ “သီလကြောင် ပုဂ္ဂိုလ်” ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အာဏာရှင်တွေ ပြောတဲ့ ဘုန်းကြီးအတုဆိုတာ တခြား သွားမရှာပါနဲ့။ အဲဒီလို ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးပါ။ အာဏာရှင်တွေဟာ မိမိကို ပေါင်းစားတဲ့ “ကြောင်သူတော်တွေ” ကို ဆည်းကပ်လေ့ ရှိပါတယ်။
သူတော်ကောင်း ရဟန်းတပါးအနေနဲ့ ကိုယ့်တဝမ်းတခါး စားရဖို့ လူဒါယကာ တယောက်ကို အဲဒါလောက် မြှောက်ပင့်ခယ ဝပ်တွားစရာ မလိုပါဘူး။ ဘုရားတန်ဆောင်းတွေမှာ ချိတ်ထားတဲ့ ကောသလမင်း အိပ်မက် သရုပ်ဖော် ပန်းချီကားချပ်တွေမှာ တွေ့ရတဲ့ ခွေးလိုလို၊ ဆိတ်လိုလို ကောင်တွေကို ဦးခေါင်းသေးသေး၊ နှာခေါင်းကြီးကြီး၊ နဖူးမောက်မောက်နဲ့ ခွေးခြင်္သေ့တွေ ဝန်းရံ ခစားနေတာကို အမှတ်ရစေပါတယ်။ တကယ့်ကို ဇောက်ထိုး ပြောင်းပြန်ကြီးပါ။
ကိုယ်တယောက် ရနိုင်စရာရှိတဲ့ မဆိုစလောက် အခွင့်အရေးကြောင့် အာဏာရှင်တွေရဲ့ ရက်စက် ယုတ်မာမှုကို အားပေး အားမြှောက်လုပ်ရင် ကိုယ်အပါအဝင် ကိုယ့်နိုင်ငံ၊ ကိုယ့်လူမျိုး ဘယ်သူမှ အကျိုးမရှိနိုင်ပါဘူး။ စဉ်းစား ကြည့်စေချင်ပါတယ်။
(၁) အသံရှင် ကိုယ်တိုင်မှာ အလိုအလျောက် ရဟန်းအဖြစ်က လူ့အဖြစ်သို့ လျှောကျ သွားခဲ့ရတယ်။ (သင်္ကန်း ဝတ်ထားပေမယ့် ဘုန်းကြီး မဟုတ်တော့ဘူး။ အာဏာရှင်တွေ သုံးနှုန်းတဲ့ သင်္ကန်းဝတ်ဆိုတာ အဲဒီလို ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးသာ ဖြစ်သင့်ပါတယ်)။
(၂) နိုင်ငံတော်မှာ ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ ပြဿနာတွေ မငြိမ်းတဲ့အပြင် ရဟန်းသံဃာ၊ တိုင်းပြည့်လူထုနဲ့ အာဏာရှင် လူတစုအကြား ရန်òငိးတွေ ပိုမို ကြီးထွားသွားခဲ့ရတယ်။
(၃) အပြစ်မဲ့တဲ့ ရဟန်းသံဃာ၊ ကျောင်းသားလူငယ်၊ ပြည်သူ များစွာတို့ မသေသင့်ဘဲ သေဆုံးကြရတယ်။
(၄) အနာဂတ် ဗုဒ္ဓသာသနာရဲ့ အာဇာနည်လောင်းတွေ ဖြစ်တဲ့ စာသင်သား သံဃာငယ်တွေ အတင်းအဓမ္မ လူဝတ် လဲခံရတယ်။
(၅) ဗုဒ္ဓကျမ်းစာကို သင်ကြား ပို့ချပေးတဲ့ စာသင်တိုက်ကြီးတွေ ညအချိန်မှာ စစ်နယ်မြေက ရန်သူ့စခန်းလို ဥပဒေမဲ့ အဓမ္မ ဝင်ရောက် စီးနင်း၊ လုလက်ဖျက်ဆီး၊ သတ်ဖြတ် ခံကြရတယ်။
(၆) “ယိုသူမရှက်၊ မြင်သူရှက်” ဆိုသလို ဗုဒ္ဓအဆုံးအမ ထွန်းကားတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဒီလို လူမဆန်တဲ့ ရိုင်းစိုင်း ရက်စက်မှုတွေ ဖြစ်ပေါ်နေတာကို ကမ္ဘာက သိမြင်သွားလို့ တမျိုးသားလုံး အရှက်တကွဲ ဖြစ်ရတယ်။
(၇) အာဏာရှင်တွေ သက်ဆိုးရှည်သလောက် တိုင်းပြည် လူထုရဲ့ဘဝ ဆင်းရဲတွင်း နက်စေတယ်။
လူဖြစ်ချင်ရင် လူ့အရည်အချင်း ရှိရမယ်လို့ အာဏာရှင် ပရိသတ်ကို လိုက်ဆိုခိုင်းခဲ့တဲ့ ဆရာတော်ဆိုသူ အာဏာရှင်ရဲ့ အလိုတော်ရိ “ဖော်လံဖား” ကိုယ်တိုင်မှာ လူ့အရည်အချင်း လူ့ဂုဏ်သိက္ခာ ကင်းမဲ့လို့ ဖော်ပြပါ အကျိုးဆက်တွေ ဖြစ်ခဲ့ရတာပါ။
အသံရှင် ဘုန်းကြီးအနေနဲ့ အာဏာရှင်ကို ထောက်ခံတယ် ဆိုရင်လည်း သူ့ရဲ့ ရွေးချယ်မှုပဲ ဖြစ်လို့ မဝေဖန်လိုပါဘူး။ လွတ်လပ်ခွင့် ရှိသင့်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အသံရှင် “ဆရာတော်” ဆိုသူရဲ့ နည်းလမ်းမကျ မှားယွင်းတဲ့ လမ်းပြစကား၊ လူတွေကို သတ်ဖြစ်အောင် အားပေးတဲ့ စကားတွေကြောင့် လက်နက်ဆိုလို့ မေတ္တာ ပို့သံမျှသာ ပါရှိတဲ့ ငြိမ်းငြိမ်းချမ်းချမ်းနဲ့ မေတ္တာပို့ပြီး မိမိဆန္ဒကို ဖော်ပြနေကြတဲ့ အပြစ်မရှိတဲ့ စာသင်သား ရဟန်း သံဃာတော်တွေ၊ ကျောင်းသား လူငယ်တွေ၊ ပြည်သူပြည်သားတွေ မမြင်ရက်၊ မရှုရက်လောက်အောင် သွေးမြေကျရတာကတော့ သမိုင်းတွင်ရစ်တဲ့ တကယ့် အဖြစ်ဆိုးကြီးပါ။
ဒါကြောင့် ၁၂ဝဝ ကျော်ရှိတဲ့ အဲဒီ ကျောင်းတိုက်က တပည့် သံဃာတော်တွေကိုရော ထောက်ပံ့နေတဲ့ ဒကာ ဒကာမတွေကိုပါ “အသေဝနာ စ ဗာလာနံ” ဆိုတဲ့ မင်္ဂလာ တရားတော်အတိုင်း သူတော်ကောင်း မဟုတ်တဲ့ အဲဒီလို သူတော်ယောင် ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကို ရှောင်ကြဉ်ဖို့ အကြံပေး တိုက်တွန်းလိုပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲ ဆိုရင် ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်ကို ဆက်လက်ပြီး ထောက်ပံ့ အားပေးနေအုံးမယ်၊ ဆရာအဖြစ် ကိုးကွယ်နေအုံးမယ် ဆိုရင် လူမိုက်နောက်လိုက်၊ အဓမ္မရဲ့ ဘက်တော်သားတွေပဲ ဖြစ်နေမှာမို့ပါ။
အာဏာရှင်တွေရဲ့ သံဃာကို သင်းခွဲတဲ့ လုပ်ကြံဖန်တီးမှု မဟုတ်ရင် ဒီအသံဖိုင်ကို စစ်ရုံးကနေ အပြင်ရောက်အောင် ထုတ်ပေးတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ဟာ အဓမ္မကို အဓမ္မမှန်း သိတဲ့ လူကောင်း သူကောင်း တယောက် ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
အသံဖိုင်ထဲမှာ “သြပါဒ ခံယူပွဲ” တဲ့။ စကားလုံး ဝေါဟာရကတော့ ခမ်းနားလှပါရဲ့။ ဒါပေမဲ့ စကားလုံး လှပသလောက် အလုပ်က အရုပ်ဆိုးနေပါတယ်။ ဟုတ်ပါတယ်၊ သြဝါဒဆိုတာ မကောင်းတာကို မလုပ်ဖို့ တားမြစ်ပြီး ကောင်းတာကို လုပ်ဖို့ ညွှန်ကြားတာ၊ ဓမ္မနဲ့ အဓမ္မကို ခွဲခြားတတ်အောင် သင်ကြားပေးတာပါ။ “သြဝါဒ” ဟာ ဘယ်နည်းနဲ့မျှ “လူသတ်လမ်းညွှန်” မဖြစ်သင့်ပါဘူး။
ပထမ ရွှေကျင် ဆရာတော် ဘုရားကြီးရေးတဲ့ “ဝိစိတြဝန္ဒနာ ဘုရားရှိခိုးကျမ်း” မှာ ဗုဒ္ဓဟာ မိမိကို သေကြောင်းကြံတဲ့ အရှင်ဒေဝဒတ် ကိုတောင် သားတော် ရာဟုလာနဲ့ထပ်တူ မေတ္တာ ထားတော်မူတယ်လို့ ရေးထားပါတယ်။
ဒါကြောင့် အာဏာရှင်တွေကို စကားပြောခွင့်ရတဲ့ အသံဖိုင်ထဲက အသံရှင် ဘုန်းကြီးအနေနဲ့ “ရန်လိုရင် ရန်ပိုတယ်၊ ရန်မလိုမှ ရန်ပြိုတယ်” ဆိုတဲ့ ဒုတိယရွှေကျင် သာသနာပိုင် ဝိသုဒ္ဓါရုံ ဆရာတော် ဘုရားကြီးရဲ့ သြဝါဒကို ပေးလိုက်နိုင်ရင် အနည်းဆုံး အတိုက်အခံနဲ့ အာဏာရှင်တွေ အကြား ရန်သူလို သဘောမထားဘဲ တင်းမာမှုတွေ လျော့သွားပြီး အာဏာရှင်တွေ အနေနဲ့ အပြစ်မဲ့ ရဟန်းရှင်လူကို မသတ်မိအောင် ဆင်ခြင်ကောင်း ဆင်ခြင်သွားစေ နိုင်ခဲ့မှာပါ။ ဒီလိုဖြစ်ခဲ့ရင် အသံရှင် ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလည်း (ရွှေဥမင် ဆရာတော်ရဲ့ စကားအတိုင်း) “လောကတွင် အလွန့်ယောက်ျား” ဖြစ်သွားနိုင်ခဲ့မှာပါ။ ခုတော့ သူ့ခမျာ တသက်လုံး ထိန်းသိမ်းလာတဲ့ သိက္ခာတွေ၊ လုပ်ဆောင်ချက်တွေ တခါတည်း စုန်းစုန်း နစ်ရရှာပြီပေါ့။
(ဗုဒ္ဓသာသနာကို ထိခိုက်လွန်းလို့ပါ။ ပုဂ္ဂိုလ်ရေး တိုက်ခိုက်ဖို့ကို မရည်ရွယ်ပါဘူး။)
Posted by YeKyawAungMDY at 11:01 PM
ရုရှရောက် စစ်အာဏာရှင် ပေါက်စ (http://www.mmedwatch.blogspot.com/မှ ပြန်လည်ကူးယူဖော်ပြထားပါသည်။)
(နအဖကို နွားအဖဟု အမည်ပြောင်းရန် အကြံပေးလာကြပါသည်။ ပေးမည်ဆိုလည်း ပေးလောက်စရာဖြစ်ပါသည်။ ဦးနှောက်အဆေးခံရသော နွားကြီး၊ နွားကလေးများမှာ မည်သည့် သတင်းအချက်အလက်များပေးစေကာမူ နွားကား နွားသာဖြစ်သည်။ ထိုနွားများထဲမှ နွားတစ်ကောင်ဖြစ်သည့် ဗိုလ်ပေါက်စနေလင်းမောင်မှာ ထိုအထဲမှ တစ်ကောင်ဖြစ်ပါသည်။ ဘလော့ဂ်ဖျက်သိမ်းခြင်းကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့က ဓါတ်ပုံ ပယ်ဖျက်သေးသည်ကိုပင် ထွက်ခတ် ခတ်ပြီး "ဘယ်သူ့ကျွန်များကြောင့် ဘယ်
၀ါ့ကျွန်များကြောင့် " လုပ်ချင်သေးသည်။
နေ့စဉ်မပျက်ပင် နေလင်းမောင်၏ ကိုယ့်ပေါင်ကိုယ်လှန်ထောင်းမှုကို ဖတ်လိုကြောင်း စာပေါင်းများစွာ ရောက်လာသည်ကတစ်ကြောင်း၊ နေလင်းမောင် အမည်ရ ငကြောင်၏ ကဂျိုးကဂျောင် ပြန်ကြားချက်ကြောင့်လည်းကောင်း ကျွနုပ်တို့က လျှို့ဝှက်ပေးထားသော သူ၏ပို့စ်ကို လူသိရှင်ကြားတင်ရန်၊ သူ၏ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချို့ကို တို့ထိပေးရန် သဘောတူလိုက်ကြပါသည်။
(၁) သူသည် စစ်ဗိုလ်ပေါက်စ ဖြစ်ကာစတွင် အပြင်မထွက် မရှုပ် မပွေသူဟု နာမည်ရပါသည်။ ဦးလေးအိမ်တွင်သာ အိမ်တွင်းပုန်းလုပ်၍ နေရပါသည်။ များမကြာမီပင် ဦးလေး၏သမီး (နှမ၀မ်းကွဲအရင်းကြီး) နှင့် ကျုးကျုးလွန်လွန်ဖြစ်ပြီး ဗိုက်ကြီးပါသည်။ ဗိုက်ကြီးလာစဉ်ပင် ရုရှပညာသို့ ပညာသင်ရောက်လာပါသည်။
(၂) ထိုနှမ တစ်ဝမ်းကွဲခေါက်ခေါက်၏ ဗိုက်ကိုလည်း တာဝန်မယူဟု သိရပါသည်။ (ဤအချက်များသည်ပင် သူ၏ လူမုန်းများခြင်း၊ ဒေါက်ဖြုတ်ခံရခြင်းဖြစ်ဖွယ်ရှိပါသည်။)
(၃) ကိုယ့်ကိုယ်ကို လိပ်ပြာမလုံပါဘဲလျှက်၊ ကိုယ့်နှမကိုယ်ပင် မစောင့်စည်းနိုင်ပါပဲလျှက် စကားကြီးစကားကျယ်တွေ ပြောမနေရန် ကျွန်ူပ်တို့က အထုပ်ဖြေလိုက်ပါသည်။
အကယ်၍ (အမည်ရင်း နေလင်းမောင်၊ ကိုယ်ပိုင်နံပါတ် ၃၅၇၅၆၊ အဖကားဒရိုင်ဘာ၊ နေရပ် မန္တလေး ပိုက်ကျုံး၊ လောလောဆယ် Mephi University (Russia, Moscow)၊ စည်းကမ်းထိမ်းသိမ်းရေး ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်) အနေဖြင့် ချေပပြောဆိုလိုပါက မည်သည့် မီဒီယာတွင်ဖြစ်စေ၊ ကျွန်ုပ်တိ်ု့မီဒီယာမှဖြစ်စေ ပြောဆိုချေပနိုင်သည်။ (ကျွန်ုပ်တို့က ဆင်ဆာမဖြတ်ပါ)။)
From Oppositeye blog (ယခု ဖျက်သိမ်းပြီး)
ငါ့ဘလော့ခ်နဲ့ ပတ်သတ်လို့ ရှင်းပြရရင် ဒီဘလော့ခ်စတင် ဖြစ်လာရတဲ့ အကြောင်းက တလောက BBC ကလွင့်သွားတဲ့ ရုရှားရောက် မြန်မာကျောင်းသားတွေ ဘာဖြစ်ပါတယ် ညာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့ သတင်းနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး စတင်ပေါ်ပေါက်လာတာပါ..သူတို့ ဘယ်လိုသတင်းလွှင့်သွားတယ်ဆိုတာလဲ မင်းတို့လဲကြားလိုက်ရသလို မင်းတို့ငါတို့ကိုလဲ စော်ကားသွားတာပဲ မဟုတ်လား..တကယ်တော့ ရုရှားရောက်နေတဲ့ ကျောင်းသားတွေဆိုတာ သာမန်ပြည်သူတစ်ယောက် အနေနဲ့ ကြည့်မယ်ဆိုရင် လူငယ်လူလွတ်အရွယ် ၂၀ နဲ့ ၂၅ ၀န်းကျင်တွေများပါတယ်..အဲဒီအတွက် လူငယ်သဘာဝ မိန်းခလေးများနဲ့ ချစ်ကြိုက်ကြတာ ချစ်သူရည်းစား၊ ဘ၀ကျင်ဖော်ရှာဖွေကြတာတွေ ရှိပါတယ်..ဒါပေမဲ့ သတင်းမှာတော့ ဒါဟာအပြစ်ကြီးတစ်ခုလို ဖြစ်နေတာ ဘာလို့များပါလဲ...
သူတို့စကားနဲ့ သူတို့ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ လူကိုလူလို့ မမြင်ကြလို့သာ သူတို့အနေနဲ့ အပြစ်လို့ မြင်နေကြတာပါပဲ...သူငယ်ချင်း..ငါတို့တွေက စက်ရုပ်တွေ မဟုတ်သလို ကာမစိတ်ကုန်ခမ်းနေတဲ့ သက်ကြီးရွယ်အိုတွေလဲ မဟုတ်ဘူးလေကွာ..စစ်သားတွေ အရာရှိတွေ မိန်းမမယူရဘူး၊ ရည်းစားမထားရဘူးလို့ တာမြစ်ထားတာမှ မရှိတာ.အဲဒါကို အပြစ်လိုလုပ်ပြောပြီး ငါတို့တွေ အေးအေးဆေးဆေးနေနေတာကို လာခလုတ်တိုက်သွားတဲ့အတွက် ဒီဘလော့ခ်ကို လုပ်လိုက်တာပါပဲ..
ဘလော့ခ်ရဲ့ Profile မှာ ရေးထားသလို ဒီဘလော့ခ်ကို စတင်လုပ်မယ်ဆိုကတည်းက အရင်ဆုံး ကြုံတွေ့ရမယ့် ဆိုးကျိုးတွေကို ငါစဉ်းစားထားပြီးသားပါ..အဲဒီအတွက်တော့ သူငယ်ချင်းရေ မင်းပြောလိုက်လို့ ငါတုန်လှုပ်မသွားပေမယ့် ငါအံ့သြမိတာတော့ အမှန်ပဲ..ဘာလို့လဲဆိုတော့ ငါကမင်းတို့ကို စစ်သားတွေလို့ မြင်နေတာကိုး.. အဲဒီသတင်းအတွက်လဲ မင်းတို့သူငယ်ချင်းတစုကတော့ ပျော်ရွှင်မဆုံးဘူးပေါ့ကွာ.. ဒါပေမယ့် ငါအပြစ်မပြောပါဘူး..မင်းတို့ကို ၂ နှစ်လောက် BBC နားထောင်ပြီး စစ်တပ်မကောင်းကြောင်းတွေကို ရိုက်သွင်းပေးသွားတဲ့၊ အခုလဲ ပြောမြဲပြောနေတဲ့ မင်းတို့ရဲ့ အပေါင်းအပါတွေကြောင့်သာ မင်းတို့ဒီလိုလုပ်ရပ်တွေ လုပ်ပြီး ရဲဘော်ရဲဘက်စိတ်ပျေက်သွား တယ်လို့ ငါသိထားလို့ပဲ..
မင်းတို့တွေ စစ်တပ်ထဲမှာနေ စစ်တပ်မကောင်းကြောင်းပြောပြီး ဆန့်ကျင်ဘက်မီဒီယာတွေကို ဆောင်းပါးတွေ ရေးပို့နေတာ ငါသိထားပေမယ့် ငါကတော့ ရဲဘော်ရဲဘက်စိတ် ရှိတယ် သူငယ်ချင်း..ငါ မလုပ်ပါဘူး..အဲဒီလိုပဲ မင်းနဲ့ အပေါင်းအပါတွေကိုလဲ ငါဖော်ကောင် မလုပ်ပါဘူး..သစ္စာမဖောက်ပါဘူး.. ဒါပေမဲ့ သူငယ်ချင်း စစ်တပ်မှာတော့ သစ္စာဖောက်တာ မကောင်းတဲ့လုပ်ရပ် တစ်ခုပဲ..အရပ်သားတစ်ယောက်က စစ်တပ်မကောင်းကြောင်းပြောတာ ငါလက်ခံပေမဲ့ မင်းလို စစ်သားတစ်ယောက်က စစ်တပ်ထမင်းစားပြီး စစ်တပ်မကောင်းကြောင်းပြောတာ ငါအံ့သြသလို စိတ်လဲတိုတယ်..
ငါ့လိုပဲ မင်းတို့ကို စိတ်တိုနေတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေလဲ အများကြီးပဲ..မင်းတို့တွေ ဘယ်ခြေလှမ်းကို လှမ်းနေကြတယ်ဆိုတာလဲ သိနေတဲ့သူတွေ တစ်ပုံကြီးပဲ သူငယ်ချင်း..ပြောလို့မကောင်းလို့သာ မသိချင်ဟန်ဆောင်နေကြတာ..အဲဒီတော့ မင်းစစ်သားတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး စစ်တပ်မကောင်းဘူးပြောနေရင် Honour ရှိရှိ စစ်တပ်ကထွက်လိုက် သူငယ်ချင်း..အကောင်းဆုံးပဲ..မင်းသိထားဖို့က ငါတို့မြန်မာ့တပ်မတော်က တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး သစ္စာရှိသလို အထက်ကပေးအပ်တဲ့ အမိန့်ကိုလဲ လွန်ဆန်တယ်ဆိုတာ မရှိခဲ့ဘူး..အဲဒီတော့ မင်းတို့တသိုက် ဆက်ရှိနေရင် ကြာလာရင် မြန်မာ့တပ်မတော်ဟာ မလုပ်ဖူးတာတွေ လုပ်လာလိမ့်မယ်လို့ ငါမြင်ယောင်မိတယ်..
သူငယ်ချင်း..မင်းဆန့်ကျင်ဘက်သမား..စစ်တပ်မကောင်းကြောင်းပြောချင်ရင် မင်းတို့ဟာမင်းတို့ စစ်တပ်ကထွက်လိုက်ကျတာ မင်းတို့အတွက် အကောင်းဆုံးပဲ..မင်းတို့ပြောတဲ့ မကောင်းဘူးဆိုတဲ့ စစ်တပ်မှာ ခိုကပ်ပြီးတော့ $ ၂၅၀ ကို မျက်နှာပြောင်တိုက် ယူနေတာကတော့ မကောင်းဘူးပေါ့ကွာ.. မင်းတို့ပြောတဲ့ မကောင်းဘူးဆိုတဲ့ စစ်တပ်မှာ မင်းတို့တွေ ဘာလို့များ ဆက်နေနေကြသေးသလဲ.. မင်းတို့ကို ငါအရမ်း အံ့သြမိတာကတော့ UN တပ်တွေ မြန်မာနိုင်ငံကို မ၀င်လို့ စိတ်တိုနေကြတဲ့ မင်းတို့ကောင်တွေရဲ့အကြောင်းကို ကြားရတဲ့ အချိန်ပဲ..
အရပ်သားတစ်ယောက် ပြောရင်တောင် မင်းတို့က စစ်သားဖြစ်တဲ့အတွက် နားလည်အောင် ပြောပြရမဲ့ဟာက မင်းတို့ကိုယ်တိုင်ကပါ အဲဒီလို ဖြစ်နေတော့ ငါပိုပြီး အံ့သြမဆုံးဖြစ်မိတာ အမှန်ပဲ..အဲဒီတော့ သူငယ်ချင်းရေ မင်းတို့အတွက်တော့ အလားအလာကောင်းမှာ မဟုတ်ဘူးကွာ..မင်းတို့တွေရဲ့ စိတ်ထဲမှာ ရိုက်သွင်းခံထားရတဲ့ အစိုးရဆန့်ကျင်ရေးဝါဒတွေ၊ စစ်တပ်မကောင်းကြောင်း ၀ါဒတွေဝင်နေတဲ့အတွက် မင်းတို့တွေ စစ်တပ်မှာ ဆက်နေလို့မရနိုင်ဘူးလို့ ငါထင်တယ်..
အဲဒီတော့ မင်းတို့အုပ်စု စစ်တပ်မကောင်းဘူးလို့ ပြောချင်ရင် စစ်တပ်က ကျွေးတာမစားနဲ့၊ ပေးတာမယူနဲ့၊ စစ်တပ်ကထွက်ပြီး ဆန့်ကျင်ကြ..ကျွေးတာစား ပေးတာယူပြီးတော့မှ ခေါင်းဆောင်ကို အာမခံချင်နဲ့၊ အဖွဲ့အစည်းကို အာမခံချင်နဲ့ကွာ...နောက်တစ်ချက်က မင်းတို့ပြောလိုက်လို့ ငါဘယ်လိုမှ တုန်လှုပ်မသွားတာ အမှန်ပဲ.. ဘာလို့လဲဆိုတော့ ငါစလုပ်ထဲက ငါအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုလုံးအတွက် ငါလုပ်ခဲ့တာ..ငါဘာတေါနဲ့ ရင်ဆိုင်ရမယ်ဆိုတာကိုလဲ ငါတွေးထားပြီးသား..အရာရှိတစ်ယောက် နိုင်ငံရေးမှာ ၀င်ပါလို့ အပြစ်ပေးရင်လဲ ငါခံရမယ်ဆိုတာကို ငါကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားပြီးသား သူငယ်ချင်း..
မင်းတို့လဲ အဲဒီအတွက်တော့ ပြင်ဆင်ထားဖို့ လိုမယ်ထင်တယ်..ဒီဘလော့ခ်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ငါအရင်ဆုံး ကြုံတွေ့ရတာကတော့ အမြင်ချင်းမတူတဲ့ ငါ့ချစ်သူနဲ့ လမ်းခွဲလိုက်တာပဲ.. ငါ့အတွက်ကတော့ ချစ်သူဆိုတာ ရှာသလောက်ရနိုင်ပေမဲ့ စစ်သားတစ်ယောက်အနေနဲ့တော့ စစ်တပ်ထဲ တစ်ခါပဲ ၀င်ခွင့်ရှိတယ် သူငယ်ချင်း.. ဗိုလ်လောင်းဘ၀တုန်းက ငါတို့မင်းတို့တွေ ဂုဏ်ယူခဲ့ကြတာ မင်းတို့လဲ မှတ်မိမှာပေါ့ကွာ..ငါတို့ဟာ ယောက်ျား၊ ယောက်ျားမှာမှ စစ်သား၊ စစ်သားမှာမှ ဗိုလ်လောင်း၊ ဗိုလ်လောင်းမှာမှ စစ်တက္ကသိုလ်ဗိုလ်လောင်ဆိုပြီး ဂုဏ်ယူခဲ့ကြတာမှတ်လား.. မင်းတို့အနေနဲ့ စစ်တပ်မကောင်းဘူးလို့ ပြောပြီးအချိန်မှန် လစာထုတ်နေတာကတော့ ရှက်တတ်မယ်ဆိုရင် ရှက်ဖို့ကောင်းတယ် သူငယ်ချင်း..
လောကမှာ လူသားတိုင်း အမှားကိုယ်စီတော့ ရှိကြတာပါပဲ..ငါမှာလဲ အမှားတွေ ရှိသလို မင်းတို့တွေလဲ အမှားတွေ ရှိတာပဲ.. ဒါပေမဲ့ ကိုယ့်အမှားကိုတော့ မမြင်ကြဘူးမှတ်လား..မင်းတို့မှားတဲ့ အမှားကို ငါ့အနေနဲ့ ပြောရမယ်ဆိုရင် မင်းတို့ဟာ BBC တွေ၊ ဆန့်ကျင်ဘက်လူတွေ ပြောတာတွေကို နားရည်ဝလို့အမှန်ထင်နေပေမဲ့စစ်သားတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ မင်းတို့အတွက်တော့ စစ်တပ်ကြီးတစ်ခုလုံးနဲ့ ရဲဘော်ရဲဘက်တွေ အတွက်တော့ မဟာအမှားကြီးတွေကို လုပ်နေတာပဲ သူငယ်ချင်း..
စာရေးသူ OppositEye at 9/30/2007 05:57:00 AM
Posted by YeKyawAungMDY at 7:08 PM
Burmese Official Confronted in New York After UN Speech
အန်တီ မျက်နှာလုံးဝမကောင်းပါ။ သူသိနေပါတယ်။ ဗြုံးစားကြီး Gambari ရောက်လာတယ်ဆိုတာကို command sense အရ သိနေပါပြီ။ နအဖ ရက်ရက်စက်စက်လုပ်လိုက်ပြီဆိုတဲ့အရာကို သိနေလို့ အန်တီ မျက်နှာ လုံးဝမကောင်းပါ။
ကျနော်တော့ လုံးဝယုံနေပါတယ်။ မကြာခင် နအဖ ကျဆုံးတော့မှာပါ။ ဖိနှိပ်မှုများလေ၊ အုံကြွလေပါပဲ။ လက်နက်အားကိုးပြီး၊ ၈၈ အာဏာသိမ်းပုံလိုမျိုးနဲ့ ထိမ်းလို့ရမယ်ထင်နေတယ်။ မကြာခင်မှာ အာဏာရှူးလက်တစ်ဆုပ်စာ စစ်အာဏာရှင်တွေကို ဖယ်ရှားမယ့် ပြည်သူ့ဘက်တော်သား တပ်မတော်သား စစ်စစ်တွေသိပ်မကြာခင် ပေါ်လာပါတော့မယ်ဆိုတာကိုတော့ ကျနော်ယုံကြည်နေပါတယ်။
အမျိုးဘာသာ သာသနာကိုတော့ အကွယ်အပျောက်ခံမှာမဟုတ်ပါ။ ပြည်သူ့ဘက်တော်သား တပ်မတော်သားစစ်စစ်တွေ ပါလာအောင် ကျနော်တို့ တတ်နိုင်သလောက် စည်းရုံးကြဖို့လိုပါတယ်။
့ဥာဏ်ဝင်းပြောတဲ့မဟုတ် မမှန်တွေကို ဒေါသဖြစ်နေသော မျိုးချစ်မြန်မာNYလူအုပ်ကြီး
Posted by YeKyawAungMDY at 9:50 PM
http://niknayman.blogspot.com/ cbox မှ ယူထားပါသည်။ jep image file ပြောင်းပြီး၊ ဖော်ပြထားပါသည်။
Posted by YeKyawAungMDY at 8:45 PM
'Massacred monks dumped in the jungle'
The bodies of hundreds of executed monks have been dumped in the jungle in Burma and thousands of protesters are dead,aformer intelligence officer for Burma's ruling junta has claimed.
Speaking from his border hideout last night Hla Win said: "Many more people have been killed in recent days than you've heard about. The bodies can be counted in several thousand."
Mr Win, the most senior official to defect so far, said he fled when he was ordered to take part inamassacre of holy men. He is hoping to cross into Thailand and seek asylum at the Norwegian Embassy.
The 42-year-old, who is ex chief of military intelligence in Rangoon's northern region, said: "I decided to desert when I was ordered to raid two monasteries and force several hundred monks onto trucks.
He made his escape with his teenage son from Rangoon, leaving behind his wife and two other sons.
The claims are reported by the exiled Burmese blogger Soneseayar.
Reports from exiles along the frontier claimed that hundreds of monks had simply "disappeared" as 20,000 troops swarmed around Rangoon yesterday to prevent further demonstrations by religious groups and civilians.
Reports reaching dissidents hiding out on the border also suggested some 2,000 monks are being held in prison or in university rooms which have been turned into cells. It was claimed that many were savagely beaten atasports ground on the outskirts of Rangoon, where they were heard crying for help. Others who had failed to escape disguised as civilians were locked in their bloodstained temples.
Meanwhile, Ibrahim Gambari, the United Nations special envoy, was in Burma today seeking meetings with the ruling military junta in attempts to halt violence against monks and pro-democracy activists.
Heavily-armed troops and police flooded the streets of Rangoon during Mr Ibrahim's visit at the weekend to prevent new protests.
He is yet to meet senior general Than Shwe or his deputy Maung Aye. The meeting is now expected tomorrow.
Posted by YeKyawAungMDY at 9:08 PM
‘‘Quick Regime Change အတွက် ဘက်ပေါင်းစုံကနေ ပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်ကြပါတော့’’
ကျနော်တို့ ပြည်ပက သူတွေအနေနဲ့ နည်းလမ်းပေါင်းစုံနဲ့ ကြိုးစားကြရတော့မယ်။ ဒီခွေးမသားထက်တဲ့ အဆင့်ထက်ကို အဆင့်အတန်းမရှိတဲ့ ‘‘နအဖ’’က သူတို့ အသက်သေသည်အထိ အာဏာကို စုပ်ကိုင်ထားတော့မှာ၊ ဒါက သိပ်ကို ရှင်းနေပါပြီ။ ဘုရားရှင်တော်မြတ်က ငြိမ်းချမ်းရေးတရားဟောရင်တောင် ဘုရားရှင်တော်မြတ်ကိုတောင်သတ်ဝံ့မယ့်လူတွေဖြစ်နေပြီ။ ရန်စွယ်တငေါငေါနဲ့ခွေးဘီလူးလိုဖြစ်နေပြီ။ အဲဒီခွေးကို ခြောက်ဖို့နိုင်ဖို့ဆိုတာ ကျနော်တို့ လက်နက်ရှိမှ ဖြစ်မယ်။ ကျနော်တို့ နည်းလမ်းပေါင်းစုံကိုသုံးပြီး စုပေါင်းညီစွာနဲ့ နအဖ လက်တစ်စုပ်စာ စစ်အာဏာရှင်ကို ကိုယ်တိုင်ပါဝင် စွန့်လွတ်မှုနဲ့အတူ အမြစ်ကနေယိုင်နှဲ့ပြီးတော့ ကျိုးပမ်းကြပါစို့။
Posted by YeKyawAungMDY at 7:09 PM
‘‘သြဂုတ်လဆန်းပိုင်းကတည်းက group မေးမှ ရထားသော ဟောစာတမ်းတစ်ခုပါ’’
ဒီဟောစာတမ်းဟာ မြန်မာပြည်သား သမိုင်းနှင့် နက္ခတ် သုသေတီတစ်ဦးမှ group mail သို့ သြဂုတ် လဆန်းပိုင်းလောက်ကတည်းပေးပို့ထားသော ဟောစာတမ်းဖြစ်ပါသည်။ အဲဒီတုန်းက ဖတ်ပြီး သိပ်ပြီး ဂရုမထားခဲ့မိပါ။ သူပြောဟောထားသော အရာများသည် နက္ခတ်များနှင့် ယှဉ်ပြီး ဟောထားသော ဟောစာတမ်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။
Posted by YeKyawAungMDY at 11:20 PM
‘‘နအဖလုံးဝကျဆုံးတော့မှာပါ၊ ၂၀၀၈ ဟာ ကျနော်တို့ ရဲ့ ဓမ္မတရားရဲ့အောင်ပွဲပါ’’
ကျနော်လုံးဝယုံကြည်တယ်။ သိပ်မကြာခင်မှာ နအဖ လုံးဝပြုတ်ကျတော့မှာပါ။ လုံးဝကျနော်ယုံတယ်။ ဘုရားကိုဖျက်၊ ကျောင်းကိုဖျက်၊ သံဃာကိုသတ်၊ အပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေကိုသတ်၊ ရက်ရက်စက်စက်နဲ့ အဓမ္မတရားတွေကို လက်ကိုင်ပြုခဲ့တာအခု ကံတရားက သူတို့ကို ခွင့်မပြုတော့ပါ။ ၂၀၀၈ ခုနှစ်ဟာ ဓမ္မဘက်တော်သားတွေရဲ့အောင်ပွဲပါ။ နအဖ လုံးဝကျဆုံးတော့မည်။ ၂၀၀၈ မှာ ကျနော်တို့ သွေးမြေကျခဲ့တဲ့ သံဃာတော်အရှင်သူမြတ်များ၊ ကျောင်းသားများ၊ ပြည်သူများ အတွက် သာ့သနာ့ အလံ၊ ခွပ်ဒေါင်းအလံတွေကို မြန်မာပြည်မှာ ကျနော်တို့ အောင်လံလွှင့် နိုင်ကြတော့မယ်။ ယုံကျပါ။ နအဖ ကျဆုံးတော့မယ်။ ၂၀၀၈ ခုနှစ်ဟာ ကျနော်တို့ ဓမ္မတရားဘက်တော်သားတွေရဲ့ အောင်ပွဲ။
Posted by YeKyawAungMDY at 6:21 PM
Moethee Zun: MaSoe Rein Sa Ya Daw Gyi's Speech
Posted by YeKyawAungMDY at 12:37 PM
Posted by YeKyawAungMDY at 9:48 PM
Posted by YeKyawAungMDY at 6:06 PM
Myanmar junta under pressure (29 Sept 07)
ဒီမှာက လိပ်စာပါ - ကုလကိုယ်စားလှယ်ကြီး ပြန်သွားလို့မဟုတ်တာတွေ ပြောခဲ့ရင် - Professor Ibrahim Gambari . Undersecretary General for Political Affairs . United Nations . S-3770A New York . NY 10017 USA . Tel: +1 212 963 5055/ 0739 , Fax: +1 212 963 5065/ 6940 (ATTN: UNDER SECRETARY GENERAL POLITICAL AFFAIRS) E-mail: gambari@un.org
Posted by YeKyawAungMDY at 5:04 PM
မတည်မြဲတဲ့ အဓမ္မတရားကိုမေ့သော စစ်အာဏာရှင်
ဘေးအရာမှ မမြဲဘူး။ ပိုဆိုးတာက အဓမ္မတရားကို ဖက်တွဲထားတဲ့ လူယုတ်မာတွေရဲ့ စစ်အာဏာရှင်စနစ်ဟာလည်း ဘယ်လောက်ပဲ ဖိနှိပ်ပြီး ရက်ရက်စက်စက် သံဃာထု နှင့် ပြည်သူကို သတ်ပြစ်လည်း စစ်အာဏာရှင်တို့ ရဲ့ ကျဆုံးချိန်ဟာ လာနေပြီဆိုတာ ကျနော်လုံးဝကိုယုံကြည်နေပါပြီ။ စစ်အာဏာရှင် ရက်ပိုင်းအတွင်း ကျဆုံးပါစေ။ အမှန်တရားအတွက် သံဃာနှင့်ပြည်သူ တောင်းတနေသော ဆန္ဒတို့ ရက်ပိုင်းအတွင်း ဘေးရန်ကင်းစွာနဲ့ ပြည့်ဝကြပါစေ။ လွတ်လတ်ပြည့်ဝ စစ်မှန်သော ပြည်သူ့ဒီမိုကရေစီ ရရှိပါစေ။
Posted by YeKyawAungMDY at 1:27 PM
ဒီလို စိုးရွားစွာ ရက်ရက်စက်စက်သတ်ဖြတ်ခံရတဲ့သူတွေဘယ်လောက်များနေပြီလဲ
ဒီသီချင်းစာသားတွေဟာ မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့ သားတော် ရဟန်းသံဃာတော်တွေ သွေးမြေကျခဲ့ရတာကို မြင်ရကြားရပြီးနောက် ရင်ထဲကနေ ပဲ့တင်ထပ်လာတဲ့ ၀မ်းနည်းပူဆွေးသံတွေပါ.
ရေးစပ်သူကတော့ မေမြန်မာဖြစ်ပြီး ရွှေပြည်အေးက တီးခတ်ပါတယ်ခင်ဗျာ. ပိုင်နိုင်စွာနဲ့ ရင်ထဲထိစွဲငြိအောင် သီဆိုပေးသူကတော့ ဒေါ်မာမာအေးပဲ ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ.
ဒီသီချင်းကို ဘလော့ဂ်မှာတင်ပြီး အားလုံးကို ဖြန့်ဝေပေးဖို့ အကြံပြုပေးပို့ပေးခဲ့တဲ့ Burma Point မှ မမေစိုးညွှန့်ကိုလည်း ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ.
Right Click ခေါက်ပြီး Download လုပ်ယူနိုင်ပါတယ်. အဆင်မပြေရင် ဒီမှာရယူနိုင်ပါသေးတယ်. အားလုံး ဆက်လက်ဖြန့်ဝေပေးကြပါခင်ဗျာ….
ခင်ဗျားတို့နဲ့ ကျွန်တော်တို့ ခွဲခြားမရဘူး. အတူတကွရှိနေမယ်. စိတ်ဓာတ်တွေကို ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းပေးထားကြပါ..
တစ်နှစ်အတွင်း မြန်မာပြည် လုံးဝ လွတ်လပ်စေရမည်!!!
Posted by YeKyawAungMDY at 8:52 AM
Posted by YeKyawAungMDY at 7:13 PM
တပည့်တော် သစ္စာပြုပါသည် ဘုရား။ မြန်မာပြည်အတွက် အထွေထွေငြိမ်းချမ်းစေဖို့ နှင့် အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ဖို့ မေတ္တာပို့သနေသော ဘုရားသားတော် သံဃာထုအား တရားမဲ့ နအဖ စစ်အာဏာရှင်တို့သည် ယနေ့ ရက်ရက်စက်စက်သတ်ဖြတ်ခဲ့ပါသည်ဘုရား။ ထိုစကားသည် မှန်ကန်ပါသည် ဘုရား။ ထိုမှန်ကန်သော စကားကို ဘုရားတပည့်တော်သည် အဆူဆူပွင့်တော်မူခဲ့ကြပြီးသော ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်တို့အားတိုင်တည် သစ္စာပြုပါသည်။ ထိုမှန်ကန်သော သစ္စာစကားကြောင့် ရက်ပိုင်းအတွင်း ယုတ်မာရက် စက်သော စစ်အာဏာရှင် အစိုးရ ပြုတ်ကျပါစေ သတည်း။ သံဃာထုတောင်းဆိုထားသော အချက်လေးရပ်သည် ချက်ခြင်းလက်ငင်းရက်ပိုင်းအတွင်း ဘေးအန္တရာယ်အသွယ်သွယ် ကင်းရှင်းစွာဖြင့် ရရှိပါစေသတည်း၊ အောင်မြင်ပါစေသတည်း။
reporter: ဦးရှလတ်. အသက်၄၁နှစ် အမှတ်၄၃ ရှင်စောပုလမ်းနေ ခြေသလုံးဒါဏ်ရာရ.
reporter: မြသန်းထိုက် အသက်၂၆နှစ် တောင်ဥက္ကလာပ ခါးအောက်ပိုင်းဒဏ်ရာရ...
reporter: သူရိန်လင်း အသက် ၁၉နှစ် ကျောင်းသား ပထမနှစ် မြန်မာစာ ဒဂုံသက္ကသိုလ် ညာဘက်ရင်အုံ သေနတ်မှန်.
reporter: စင်္ကပူနိုင်ငံသား နာမည်မသိ အသက် ၅၅နှစ် ညာဘက်ရင်အုံ ကျောနောက် ကျည်ဆံပေါက်ထွက်.
(Comment ပေးလာသော ကိုနေမိုး၏အမြင်ကို MMEDWatch မှ ကူးယူပြီးပြန်လည်တင်ပြလိုက်ပါသည်)
မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှ ငြိမ်းချမ်းစွာဆန္ဒပြနေသော သံဃာတော်များနှင့် ပြည်သူလူထုအပေါင်းကို သတင်းစကား ပါးလိုပါသည်။ ဒီနေ့ ကမ္ဘာတ၀ှမ်းလုံးရှိ နိုင်ငံခေါင်းဆောင်များနှင့် ထင်ရှားသည့် သတင်းမီဒီယာများမှ မြန်မာနိုင်ငံ၏ ယနေ့ဖြစ်ပေါ်နေသော လူထုလှုပ်ရှားမှုများကို အနီးကပ် သေချာစောင့်ကြည့်ပြီး နိုင်ငံအသီးသီးက ပြည်သူတွေကို တင်ပြနေပါသည်။
အထူးသဖြင့် ၁၉၈၈ အရေးအခင်း ကာလတုန်းက စစ်တပ်ကနေ ဆန္ဒပြသူ သုံးထောင်ကျော်ကို သတ်ဖြတ်ပြီးနှိမ်နင်းခဲ့တယ်ဆိုတာကို အကျယ်တ၀င့် မီးမောင်းထိုး ထောက်ပြနေကြပါတယ်။ အခုတခါ စစ်တပ်ကနေ သေနတ်ပစ် အကြမ်းဖက်ပြီး နှိမ်နင်းလာပြီဆိုတော့ ၁၉၈၈တုန်းကလိုမျိုး လူတွေ အစုလိုက် အပြုံလိုက် အသတ်မခံရအောင် ကုလသမဂ္ဂနဲ့ နိုင်ငံတကာ အသိုင်းအ၀ိုင်းက မြန်မာပြည်သူတွေကို ဘယ်လိုမျိုး ကာကွယ်ပေး ကူညီနိုင်မလဲဆိုတာ အထူးမေးခွန်းတရပ် ဖြစ်လာနေပါပြီ။ ဒါဟာ မြန်မာနိုင်ငံအတွက် ၀မ်းသာအားတက်စရာ မေးခွန်းတရပ်ပါပဲ။ ဒီနေ့ခေတ် မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ပြည်သူလူထုတွေဟာ နိုင်ငံတကာရဲ့ နွေးထွေးတဲ့ စိုးရိမ်စောင့်ကြည့်နေမှုအောက်မှာ ရောက်ရှိနေတာပါ။
စစ်တပ်က အာဏာစက်နဲ့ နှိမ်နင်းမယ်လို့ ဆိုပေမယ့် သံဃာထုတရပ်လုံး လက်ရှိကိုင်စွဲထားတဲ့ ပတ္တနိက္ကုဇ္ဇနကံဆောင် သပိတ်ပွဲဟာလည်း ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရား လမ်းညွှန်ချမှတ်ထားခဲ့တဲ့ ခိုင်မာပြတ်သားတဲ့ ဓမ္မစက် အစစ်အမှန်ပါ။ ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရဲ့ ဓမ္မစက်ကို အာဏာရူးစက်နဲ့ လာတိုက်လို့ မရပါဘူး။ ဒီနေ့ သံဃာထုတွေက သံဃာစစ်မှန်ကြောင်း သစ္စာဆိုပြီး ရပ်တည်ချက်ကို အခိုင်အမာ ထုတ်ဖော်ပြသ နေပါပြီ။ သစ္စာစစ်မှန်ရင် ဘေးဆိုး အန္တရာယ်ဆိုးတွေက အနှောင့်အယှက်ပေး အနိုင်မယူနိုင်ပါဘူး။ သစ္စာစစ် သစ္စာမှန်တို့မည်သည် အကျိုးကျေးဇူးကောင်းတွေကိုသာ ရရှိစေပါတယ်။ ပါရမီဆယ်ပါးထဲမှာ အသက်နှင့် ခန္ဓာကိုယ်ကို ပေးဆပ်ခြင်းက အမြင့်မြတ်ဆုံး တန်ဖိုးအရှိဆုံး ပါရမီဖြည့်ခြင်းပါပဲ။ သာသနာအကျိုး မြန်မာပြည်အကျိုးအတွက် မြင့်မြတ်သော သံဃာတော်များနှင့် ကျောင်းသားပြည်သူတွေ စစ်အစိုးရကို ရဲရင့်စွာ ရင်ဆိုဖို့ အဆင်သင့်ဖြစ်လာနေပါပြီ။ စစ်တပ်ဆိုတာ မိုးပေါ်ထောင်မပစ်ဘူး ပစ်ရင်တည့်တည့်ပစ်တယ်ဆိုတဲ့ ဦးနေ၀င်းတောင် အမြီးကုပ်သွားခဲ့ရသေးတာပဲ အခုစစ်ဗိုလ်တွေကကော ဘာတွေမို့လို့လဲ။
ဒီနေ့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ သံဃာထုတရပ်လုံးက ညီညွတ်စွာနဲ့ အာဏာရှင်စနစ် ချုပ်ငြိမ်းပျောက်ကွယ်အောင် ဆောင်ရွက်နေကြတာဟာ ဗုဒ္ဓဘာသာ ကမ္ဘာပေါ်မှာ တည်တံ့နေသမျှ လေးစားဦးညွှတ်ရမယ့် သမိုင်းပြယုဂ်တခု အဖြစ် တည်ရှိသွားခဲ့ပါပြီ။
ဗုဒ္ဓဘာသာ ဗမာလူမျိုးဆိုပြီး ဂုဏ်ယူဝင့်ကြွားစရာကောင်းတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ အလျှူဒါန ကုသိုလ်တခုခု ပြုပြီးတိုင်း တီးရတဲ့ ကြေးစည်ဆိုတာ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေရဲ့ အိမ်တွေတိုင်းမှာ ရှိပါတယ်။ ကြေးစည်သံဟာ နားဝင်ချိုပြီး ကြားရတဲ့သူတွေကို ၀မ်းသာကြည်နူး ပီတိဖြစ်စရာကောင်းတဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေရဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေး သံစဉ်တခုပါ။ ဘာသာရေးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ နေ့ထူးနေ့မြတ်တွေမှာ ဗုဒ္ဓပူဇေနိယ ဘုရားပူဇော်ခံပွဲတွေမှာ ရပ်ကွက်တကာကိုလှည့်ပြီး ပူဇော်ကန်တော့ရတဲ့ အစဉ်အလာ ဗုဒ္ဓဘာသာမှာ ရှိပါတယ်။
အခုအချိန်လို မြင့်မြတ်စင်ကြယ်လှတဲ့ ဗုဒ္ဓရဲ့ ဓမ္မစက်နဲ့ ရိုင်းစိုင်းယုတ်မာလှတဲ့ လူမိုက်တွေရဲ့ အာဏာရူးစက် ယှဉ်ပြိုင်ထိပ်တိုက်တွေ့လာတဲ့ အခါမှာ သံဃာထုနဲ့ ပြည်သူလူထုတွေဖက်ကနေ ချီတက်ရာတပ်ဦးမှာ ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရဲ့ ဆင်းတုတော် ရုပ်ပွါးတော်တွေကို ဝေါစင်များပေါ်မှာ ခမ်းနားထည်ဝါစွာ ပြင်ဆင်ပြီး ငြိမ်းချမ်းရေး ကြေးစည်သံ တဝေေ၀တီးရင်းနဲ့ သာသနာ့အလံကို မြိုင်မြိုင်ဆိုင်ဆိုင်လွှင့်ထူပြီး မေတ္တာစိတ်အပြည့်အ၀နဲ့ ယှဉ်ဆိုင်မယ်ဆိုရင် အောင်မြင်မှု သေချာပေါက်ရနိုင်ပါတယ်လို့ ယုံကြည့်မိပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံမှာ ငြိမ်းချမ်းရေး ကြေးစည်သံတွေ ချိုလွင်သာယာစွာ အမြန်ဆုံး လွင့်ပျံနေနိုင်ပါစေ။
( to those who are living in Sg: Daw kyaing Kyaing address,, Blk 353#08-311, Cgoa chu Khan, Singapore. Phone: 93396327)
Posted by YeKyawAungMDY at 3:45 PM
မြန်မာပြည်သူပြည်သားများအတွက် အသက်ကို စွန့်လွတ်ပေးဆပ်ခဲ့သော ဘုန်းဘုန်းတို့နှင့် အသက်စွန့်ခဲ့သော လူထု
ကျနော် တစ်အားဝမ်းနည်းလို့ မျက်ရည်ကျခဲ့ပြီ၊ နာကြည်းတဲ့စိတ်လည်း တစ်အားကြီးမားလာခဲ့ပြီ။
သံဃာတွေကို ရက်ရက်စက်စက်သတ်ဖြတ်ခဲ့သော ခွေးနှစ်ကောင်
got it from here: http://www.mmedwatch.blogspot.com/
Posted by YeKyawAungMDY at 7:06 PM
မြန်နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာသံဃာတပ်ပေါင်းစုကြီးနှင့် ၈၈မျိုးဆက်ကျောင်းသားများ၏ ကြေညာချက် နှင့် ပြည်သူ့မျိုးချစ်တပ်မတော်တပ်ပေါင်းစုအဖွဲ့ကြီး၏ ကြေညာချက်
get it from honourable Burmese Blogger: http://niknayman.blogspot.com/
Posted by YeKyawAungMDY at 8:49 PM
ချစ်ခင်ရပါသော မြန်မာပြည်သူပြည်သားများ ခင်ဗျား
အခုဆိုရင် အာဇာနည်သံဃာတော်များရဲ့ ဦးဆောင်မှုကြောင့် တစ်တိုင်းပြည်လုံးနီးပါး ပူးပေါင်းပါဝင်လာ ကြပြီဖြစ်တဲ့ ဒီမိုကရေစီ သပိတ်ပွဲကြီးဟာ အောင်မြင်မှုနဲ့ လက်တလှမ်းအကွာမှာ ရောက်ရှိနေပါပြီ။
ဒီအချိန်မှာ စည်းလုံးညီညွတ်ရေးဟာ အင်မတန်အရေးကြီးတဲ့အချိန်ကိုရောက်နေပါပြီ၊
ဒီတော့ ၈၈ တုန်းကအခြေအနေကို ပြန်ဆန်းစစ်ပြီးတွေးစရာ ပြင်ဆင်စရာတွေရှိလာပါတယ်။
အဲဒိတုန်းက တပ်မတော်သားတွေတောင် အမြင်မှန်ရသွားပြီး ပြည်သူတွေနဲ့စလက်တွဲခဲ့ကြပါတယ်
ဒါကိုအင်မတန် တုန်လှုပ်သွားတဲ့ မဆလ အစိုးရဟာ မျက်လှည့်စပြပါတော့တယ်
စစ်တပ်ကို မဆလ အနေနဲ့ဆက်ထိန်းချုပ်နေရင် တပ်သားတွေအကုန်လုံး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် လက်အောက်ခံတော့မယ် ဆိုတာကိုရိပ်မိတော့ စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းလိုက်ခြင်းအားဖြင့် စစ်သားများကိုနားလှည့်ပါးရိုက်လုပ်ပြီး ပြန်စည်းရုံးခဲ့တာပါဘဲ။
ကျွန်တော်တို့ပန်းတိုင်ကို ရောက်ကာမှ ပွဲအဖျက်ခံခဲ့ရပါတယ်၊
ဒါပေမယ့် အခုအချိန်မှာ အထက်က သွေးခွဲထားတော့ သူတို့ကိုလူတွေမုန်းနေပြီလို့ ၁၉ နှစ်လုံးလုံးယုံကြည် ထားတဲ့ စစ်သားတွေဟာ လူထုနဲ့ပြန်ပေါင်းစည်းဖို့ နောက်တွန့်သိမ်ငယ်နေကြပါပြီ။
မြန်မာ့နိုင်ငံရေး တော်လှန်ရေးအောင်မြင်ဖို့ဆိုတာ သား သုံး သား ပေါင်းလုပ်မှရမှာပါ။
အခု သား နှစ် သား ကစတင်နေပါပြီ နောက်ဆုံးနဲ့အရေးအကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့ သားကတော့စစ်သားပါ
ဒီသုံးသားပေါင်းမိရင် ဘယ်မင်းမဆို ကျဆုံးပါလိမ့်မယ်။
ဒီတော့ ကျွန်တော်တို့စစ်သားတွေကို စစည်းရုံးကြရမယ် ။
သူတို့လဲလူထဲကလူတွေပါ၊ ခံစားတတ်ကြမှာပါ၊ ဒေါ်စုအိမ်ရှေ့ကအဖြစ်ကို ကြည့်နှိုင်ပါတယ် ။
သူတို့ကိုအထက်ကအကြမ်းဖက် နှိမ်နင်းဖို့ အမိန့်ပေးလာတဲ့အခါ
ဖီဆန်ချင်လာအောင် ဖီဆန်ရဲလာအောင် နှိုးဆွပေးရမယ်၊
သူတို့တွေဝေပြီး ကျောင်းသားတွေနဲ့ပြည်သူတွေကို စာနာမိအောင်
မိတ်ဆွေတို့ လုပ်သားပြည်သူများနဲ့သံဃာတော်များ ဆန္ဒပြချီတက်တဲ့အခါ
“ ပြည်သူ့စစ်သား ငါတို့စစ်သား “
“ ပြည်သူ့တပ်မတော် ငါတို့တပ်မတော် “
“ ပြည်သူ့ရဲသား ငါတို့ရဲသား “ လို့ အကျယ်ကြီးအော်ပေးကြပါ။
ဒီလိုအသံတွေကြားရင် သူတို့အံ့သြပြီး တဖြေးဖြေး ယူကျုံးမရဖြစ်လာလိမ့်မယ်
သူတို့ကိုင်ထားတဲ့ သေနပ်တွေက အချက်တိုင်းနှလုံးသားကိုမှန်အောင်မပစ်နှိုင်ပါဘူး
ဒါပေမယ့် မေတ္တာတရားဟာ နှလုံးသားကိုတချက်ထဲနဲ့ ထိအောင်ပစ်နှိုင်ပါတယ်
ဘလော့ဂါအားလုံးကိုလဲ ပို့စ် လုပ်ပေးကြဖို့ မေတ္တာရပ်ခံပါတယ်
Posted by YeKyawAungMDY at 10:33 PM
တမာပင် ကျောင်းဆရာတော်၊ နတ်မောက် မှ မိန့်ကြားချက်
“လူတိုင်းမှာ သမိုင်းအကြွေး မကျန်အောင် လုပ်ရမယ်။ အကြွေးတင်တာ မကောင်းဘူး။”
get it from here: http://ko-htike.blogspot.com/
(http://www.mmedwatch.blogspot.com/ စီဘောက်မှ ကူးယူထားပါသည်။)
(ပြည်သူ့စစ်သားတွေပါဝင်လာဖို့အမှန်တကယ်လိုအပ်နေပါသည်။ ပြည်သူကိုချစ်တဲ့ တပ်မတော်သားတွေ တပ်ထဲမှာ ရှိကိုရှိနေပါတယ်။ သူ့တိုိ့ကို ပူးပေါင်းပါဝင်ရဲလာအောင်လုပ်ဆောင်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုပါတယ်။)
ရှိလေရာကို ဂေါတမ ချက်ချင်းသွားနေကျ
ရေးသူအမည် မင်းသိတယ်။ (ဒေါက်တာ သန်းထွန်း)
သန့်ရှင်းရိုးသား၍ တရားမျှတသော ဒီမိုကရေစီစနစ်သို့ ရည်ရွယ်လျှက်..
Posted by YeKyawAungMDY at 7:18 PM
Posted by YeKyawAungMDY at 9:09 PM
၈၈၈၈ သွေးသစ်ရဲဘော်များမှ ၂၀၀၈ ခုနှစ် ပြက္ခဒိန်ကို ထ...
"၈၇ ကြိမ်မြောက် အမျိုးသားအောင်ပွဲနေ့ ထုတ်ပြန်ချက်"...
အမေလူထု ဒေါ်အမာ မွေးနေ့အတွက် ဗကသများအဖွဲ့ချူပ်မှ ကဗ...
ကြခတ်ဝိုင်း ဘုန်းကြီး၏ နောက်ဆက်တွဲ သတင်းများ (ဆုံဆ...
စင်ကာပူမှ ရဲရဲတောက် မျိုးချစ်မြန်မာများ၏ ဆန္ဒပြမှု ...
စင်္ကာပူရောက် မျိုးချစ်မြန်မာများ ၏ မြန်မာ့အရေးဆွေးေ...
ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီ၏ မြန်မာ့အရေး ဆွေးနွေးပွဲ ...
Resolution from SAIH's Annual Assembly 2007: Suppo...
Myanmar Par Par Lay / Daw Ahmar risk lives to spe...
ရုရှရောက် စစ်အာဏာရှင် ပေါက်စ (http://www.mmedwatch...
Burmese Official Confronted in New York After UN S...
‘‘Quick Regime Change အတွက် ဘက်ပေါင်းစုံကနေ ပြင်ဆင...
‘‘သြဂုတ်လဆန်းပိုင်းကတည်းက group မေးမှ ရထားသော ဟောစ...
‘‘နအဖလုံးဝကျဆုံးတော့မှာပါ၊ ၂၀၀၈ ဟာ ကျနော်တို့ ရဲ့ ...
မြန်မာပြည်သူပြည်သားများအတွက် အသက်ကို စွန့်လွတ်ပေးဆ...